YEYINTNGE(CANADA): Wednesday, February 26
ရေးသားသူ- အောင်သူရ၊ ပြည်သိမ်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးသော ဒေါ်လာသန်းကြွယ်သူဌေးဟု ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်ပြောခဲ့သော၊ နိုင်ငံတွင်း အချမ်းသာဆုံးဆယ်ဦးတွင် ပါဝင်သည်ဟု သတ်မှတ်ခံထားရသည့် သူဌေးကြီးဦးတေဇက နိုင်ငံတော်သမ္မတအား ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်က စီးပွားရေးနှင့်ပတ်သက်သော အရေးကြီးကိစ္စတစ်ရပ် တင်ပြခဲ့သည်။ “တရုတ်ပြည်ကလည်း ၀င်လုပ်နေပါတယ်။ စိစစ်ပေးစေချင်ပါတယ်”ဟု ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်အဆောက်အအုံအတွင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ တွေ့ဆုံပွဲတွင် ဦးတေဇက ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းများတွင် မြန်မာနိုင်ငံသားအမည်ခံပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော နိုင်ငံခြားသားများကို စီမံကြီးကြပ်ပေးရန် အကြံပြုခဲ့သည်။ အမည်ခံလုပ်ကိုင်နေသူများမှာ လုပ်ငန်းကြီးမားသော ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းတွင်မဟုတ်ပေ။ အကျိုးအမြတ်ရရှိသော ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်း၊ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း၊ သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း၊ ရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်း၊ အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်ရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း စသည့်ကဏ္ဍမျိုးစုံတွင် ဥပဒေကို လက်တစ်လုံးခြားလုပ်ကာ ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။ အမည်ခံလုပ်ကိုင်နေသော နိုင်ငံခြားသားများတွင် တရုတ်နိုင်ငံသားများသာမက ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်၊ ကိုရီးယား၊ ဂျပန်နှင့် အနောက်နိုင်ငံသားများပါဝင်သည်။ ရာဂဏန်းမျှသာရှိသော ကမ္ဘာ့လှည့်ခရီးသွားများကုမ္ပဏီတွင် မြန်မာနိုင်ငံသားအမည်ခံပြီး ဖွင့်လှစ်ထားသော ကုမ္ပဏီ ၂၀ ကျော်ခန့်ရှိကြောင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများကဆိုသည်။ “အထည်ချုပ်အသင်းဝင်တွေထဲမှာတောင် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ကျန်သေးတယ်”ဟု အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့်စိုးကပြောသည်။ ထို့ကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံသားများအမည်ခံ၍ လုပ်ကိုင်နေကြခြင်းမှာ ယခင်တပ်မတော်အစိုးရလက်ထက်ကတည်းကပင် ရှိနေခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုနောက်ပိုင်း လုပ်ငန်းများ ပိုမိုကောင်းမွန်လာသဖြင့် လုပ်ကိုင်သူများ ပိုမိုများပြားလာခြင်းဖြစ်သည်။ “ဒီလိုဖြစ်တာက အရင်အစိုးရလက်ထက်က စက်ရုံငှား၊ မြေငှားရင်း နိုင်ငံခြားသားကို အစိုးရဆီကပဲခွင့်ပြုတယ်။ ပုဂ္ဂလိကဆီကငှားရင် တစ်နှစ်ပဲခွင့်ပြုတယ်”ဟု လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြတ်သင်းအောင်ကရှင်းပြသည်။ ထို့အပြင် အစိုးရငွေလဲနှုန်းမှာ တစ်ဒေါ်လာလျှင် ခြောက်ကျပ်သာသတ်မှတ်ထားသဖြင့် နိုင်ငံခြားသားများမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားများအား ကုမ္ပဏီများတွင် အမည်ခံခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်တွင် နိုင်ငံခြားသားများအား သာသနာပိုင်မြေ ၊ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးအတွက် ကန့်သတ်ထားသည့်မြေ၊ အမှုအခင်းဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြောင့် မြို့ပြလူနေထိုင်မှုတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်စေသော အရပ်ဒေသများတွင်ရှိသော မြေများမှလွဲ၍ ကျန်မြေယာများ ငှားရမ်းခွင့်ပေးခဲ့သည်။ ကျန်မြေများကို နှစ် ၃၀ နှင့် ထပ်တိုး ၁၅ နှစ်စီ နှစ်ကြိမ် စုစုပေါင်း နှစ် ၆၀ ငှားရမ်းခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ အလားတူ ငွေလဲနှုန်းကိုလည်း တစ်ဒေါ်လာလျှင် ခြောက်ကျပ်အစား ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစတင်၍ ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးနှင့် အနီးစပ်ဆုံးနှုန်းရှင်ဖြင့် နေ့စဉ်သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။ ထို့ကဲ့သို့ နိုင်ငံခြားသားများ လုပ်ကိုင်နိုင်စေရန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပြောင်းလဲပေးလိုက်သော်လည်း နာမည်ခံလုပ်ကိုင်နေသူများမှာ လျော့မသွားပဲ ပိုမိုတိုးပွားလာလျက်ရှိသည်။ ထိုသို့များပြားနေခြင်းမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင် နိုင်ငံခြားသားအား မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရာတွင် တစ်ရာရာခိုင်နှုန်း ခွင့်မပြုခြင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသားအမည်ခံခိုင်းမှုများ ဆက်လက်ရှိနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း လုပ်ငန်းရှင်အချို့ကဆိုသည်။ “အမည်ခံလုပ်ပေးတဲ့လူအများစုက အမျိုးသမီးတွေများတယ်။ Living Together (လက်မထပ်ဘဲအတူနေခြင်း) နေတယ်။ ရုံးအလုပ်လေး၊ ဘာလေး ကူလုပ်ပေးရတယ်။ လစာပေးထားတယ်။ အကျိုးအမြတ်တော့ ခွဲမပေးဘူး”ဟု စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးကဆိုသည်။ ထိုကဲ့သို့ အမည်ခံပြီးလုပ်ကိုင်ပေးသော မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့် ဥပဒေကြောင်းအရ အရေးယူမှုခံရနိုင်သည်။ ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်တွင် ပြန်လည်ရေးဆွဲသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေတွင် နိုင်ငံခြားသားများအား ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းသာ အများဆုံးခွင့်ပြုထားသည်။ “အခွန်ရှောင်မယ်။ စိတ်ကြိုက်အလုပ်လုပ်မယ်။ အစိုးရကန့်သတ်ချက်ကျော်ပြီး လုပ်ချင်တာပေါ့။ ဘာ Responsibility(တာဝန်ယူမှု)မှမယူချင်ပဲ အခြေအနေမကောင်းရင် ဆုတ်ပြန်လို့ လွယ်အောင်ပေါ့။ မြန်မာနိုင်ငံသားကို အမည်ခံခိုင်းတာ”ဟု Nature Dream ခရီးသွားကုမ္ပဏီမှ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဒေါ်စပယ်အောင်က နိုင်ငံသားအမည်ခံ ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သူ၏အမြင်ကိုပြောသည်။ ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းအပါအ၀င် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြီးသော လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအားနည်းမှုတို့ကြောင့် အခွန်ရှောင်ရန်နှင့် ငွေမည်းများကို ငွေဖြူလုပ်နိုင်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား အမည်ခံလုပ်ခိုင်းရခြင်းဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတစ်ဦးကဆိုသည်။ “ဖက်စပ်လုပ်တာလည်း သူတို့လှည့်ချင်တိုင်းလှည့်လို့ရတဲ့ မြန်မာလူမျိုးကို အမည်ခံသက်သက်နဲ့ လုပ်တာများတယ်။ ဒါအန္တရာယ်ရှိတယ်”ဟု စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးအေးကျော်ကထောက်ပြသည်။ ထို့အပြင် နိုင်ငံသားများအမည်ခံ ဖွင့်လှစ်ထားသည့်ကုမ္ပဏီအချို့သည် တိုင်းပြည်ပုံရိပ်ကျဆင်းစေသည့်လုပ်ငန်းများကိုပင် လုပ်ကိုင်မှုများရှိလာကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် အမည်ခံလုပ်ကိုင်ထားသော ခရီးသွားကုမ္ပဏီအချို့မှာ Night Tour များ လုပ်ဆောင်နေကြကြောင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်အချို့က ထောက်ပြပြောဆိုသည်။ အလားတူ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းတွင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသားအမည်ခံ နိုင်ငံခြားသားလုပ်ကိုင်မှုများစွာရှိသည်။ ဥပမာ ဂျပန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးက မြန်မာတိုင်းရင်းသူနှင့်ပေါင်းဖက်ကာ ထိုအမျိုးသမီးအမည်ဖြင့် မြေများလိုက်လံဝယ်ယူရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်။ ထိုသို့ ၀ယ်ယူထားပြီး နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများဖြစ်ပွား၍ စ,သုံးလုံးကစစ်ဆေးစဉ် အမျိုးသမီးငယ်က တိုက်ပေါ်မှခုန်ချ၍ မိမိကိုယ်မိမိသတ်သေသည့် ဖြစ်ရပ်မျိုးဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ယခုလောလောဆယ်မှာပင် သီလ၀ါဆိပ်ကမ်းအနီး မြေကွက်ဝယ်ယူရာတွင် အမည်ခံခိုင်းထားသော မြန်မာနိုင်ငံသားထွက်ပြေးသဖြင့် ပိုင်ရှင်ဂျပန်နိုင်ငံသားက ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်တွင် သက်ဆိုင်ရာသို့ တိုင်ကြားအမှုဖွင့်ထားသည်။ ထိုသို့ နိုင်ငံသားအမည်ခံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို “လိမ်လည်မှု၊ စာချုပ်စာတမ်းဖောက်ဖျက်မှု၊ ဌာနဆိုင်ရာကို မမှန်မကန်လုပ်မှု၊ ငွေကြေးခ၀ါချမှု၊ အဂတိလိုက်စားမှုတို့နဲ့ အရေးယူလို့ရတယ်”ဟု မည်သို့အရေးယူနိုင်ကြောင်း Internatioal Law Firm မှ ရှေ့နေဦးသန်းမောင်က အောက်ပါအတိုင်းပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်အပါအ၀င် ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးသည့်ဌာနတို့က အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး အရေးယူမှုများလည်းရှိသည်။ သို့သော် ထိုအခြေအနေကို အမည်ခံပြီးလုပ်ကိုင်ပေးနေသူအများစုက မသိရှိကြပေ။ ဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်သော အစိုးရအဖွဲ့တက်လာပြီးနောက် နာမည်ခံလုပ်ငန်းများအား ပိုင်ရှင်မှန်အမည်ပြောင်းရန် တရားဝင်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သဖြင့် လုပ်ငန်းအချို့မှာ အမည်ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်မှုများရှိခဲ့သည်။ သို့သော် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အားနည်းနေမှုနှင့် ၀န်ကြီးအချို့၏ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုများရှိနေသဖြင့် အမည်ခံလုပ်ငန်းများမှာ လျော့မသွားပဲ ဆက်လက်တိုးပွားနေခြင်းဖြစ်သည်။ “နိုင်ငံခြားသားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင် လုပ်ဖို့လို့တယ်”ဟု နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ စီးပွားရေးအကြံပေး ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်ကအကြံပြုသည်။ ထို့အပြင် သက်ဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များအနေဖြင့်လည်း အမည်ခံလုပ်ကိုင်နေသူများကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနသို့ သတင်းပေးတိုင်ကြားမှုများ လုပ်ရန်လိုကြောင်း ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်အချို့ကဆိုသည်။ အမည်ခံရင်းနှီးမြှုနှံမှုများပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် နိုင်ငံတော်အတွက် ရရှိမည့်အခွန်ငွေများဆုံးရှုံးခြင်း၊ အဆိုပါလုပ်ငန်း၌ လုပ်ကိုင်နေသော အလုပ်သမား၊ ၀န်ထမ်းများ အခွင့်အရေးရပိုင်မှု ဆုံးရှုံးခြင်း၊ လုပ်ငန်းတူ နိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်လည်း တရားမ၀င်နောက်ကွယ်မှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကြောင့် ငွေကြေးအင်အားမယှဉ်နိုင်ဘဲ အခွင့်အလမ်းများဆုံးရှုံးခြင်း၊ ထုိ့အပြင် တိုင်းပြည်၏ တရားဝင်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုကိုပါ အတားအဆီးများဖြစ်နိုင်ကြောင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များက ပြောကြားသည်။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအရ နိုင်ငံခြားသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ပါက အခွန်အခများ စနစ်တကျပေးဆောင်နေသည့်အပြင် လူမှုဘ၀တာဝန်ယူမှု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုများ မဖြစ်စေရေး စသည့်သတ်မှတ်ချက်များ ပါဝင်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးနှင်းဦးကပြောသည်။ နိုင်ငံခြားသားများက မြန်မာနိုင်ငံသားများအား အမည်ခံလုပ်ကိုင်စေမှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နစ်နာမှုများ များစွာရှိသည်။ ထိုအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ ဦးတေဇက ယခုလို မှတ်ချက်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ ကျောက်စိမ်းအဓိကထွက်သော ဖားကန့်နှင့် မြစ်ကြီးနားမှာ အခုချိန်ထိ မတိုးတက်သော်လည်း တရုတ်နိုင်ငံ ကွမ်ဂျိုးခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့သုံးမြို့မှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားပြီဟူ၍ဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံ- ကျော်ဇင်သန်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးသော ဒေါ်လာသန်းကြွယ်သူဌေးဟု ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်ပြောခဲ့သော၊ နိုင်ငံတွင်း အချမ်းသာဆုံးဆယ်ဦးတွင် ပါဝင်သည်ဟု သတ်မှတ်ခံထားရသည့် သူဌေးကြီးဦးတေဇက နိုင်ငံတော်သမ္မတအား ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်က စီးပွားရေးနှင့်ပတ်သက်သော အရေးကြီးကိစ္စတစ်ရပ် တင်ပြခဲ့သည်။
“တရုတ်ပြည်ကလည်း ၀င်လုပ်နေပါတယ်။ စိစစ်ပေးစေချင်ပါတယ်”ဟု ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်အဆောက်အအုံအတွင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ တွေ့ဆုံပွဲတွင် ဦးတေဇက ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းများတွင် မြန်မာနိုင်ငံသားအမည်ခံပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော နိုင်ငံခြားသားများကို စီမံကြီးကြပ်ပေးရန် အကြံပြုခဲ့သည်။
အမည်ခံလုပ်ကိုင်နေသူများမှာ လုပ်ငန်းကြီးမားသော ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းတွင်မဟုတ်ပေ။ အကျိုးအမြတ်ရရှိသော ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်း၊ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း၊ သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း၊ ရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်း၊ အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်ရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း စသည့်ကဏ္ဍမျိုးစုံတွင် ဥပဒေကို လက်တစ်လုံးခြားလုပ်ကာ ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
အမည်ခံလုပ်ကိုင်နေသော နိုင်ငံခြားသားများတွင် တရုတ်နိုင်ငံသားများသာမက ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်၊ ကိုရီးယား၊ ဂျပန်နှင့် အနောက်နိုင်ငံသားများပါဝင်သည်။
ရာဂဏန်းမျှသာရှိသော ကမ္ဘာ့လှည့်ခရီးသွားများကုမ္ပဏီတွင် မြန်မာနိုင်ငံသားအမည်ခံပြီး ဖွင့်လှစ်ထားသော ကုမ္ပဏီ ၂၀ ကျော်ခန့်ရှိကြောင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများကဆိုသည်။
“အထည်ချုပ်အသင်းဝင်တွေထဲမှာတောင် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ကျန်သေးတယ်”ဟု အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့်စိုးကပြောသည်။
ထို့ကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံသားများအမည်ခံ၍ လုပ်ကိုင်နေကြခြင်းမှာ ယခင်တပ်မတော်အစိုးရလက်ထက်ကတည်းကပင် ရှိနေခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုနောက်ပိုင်း လုပ်ငန်းများ ပိုမိုကောင်းမွန်လာသဖြင့် လုပ်ကိုင်သူများ ပိုမိုများပြားလာခြင်းဖြစ်သည်။
“ဒီလိုဖြစ်တာက အရင်အစိုးရလက်ထက်က စက်ရုံငှား၊ မြေငှားရင်း နိုင်ငံခြားသားကို အစိုးရဆီကပဲခွင့်ပြုတယ်။ ပုဂ္ဂလိကဆီကငှားရင် တစ်နှစ်ပဲခွင့်ပြုတယ်”ဟု လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြတ်သင်းအောင်ကရှင်းပြသည်။
ထို့အပြင် အစိုးရငွေလဲနှုန်းမှာ တစ်ဒေါ်လာလျှင် ခြောက်ကျပ်သာသတ်မှတ်ထားသဖြင့် နိုင်ငံခြားသားများမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားများအား ကုမ္ပဏီများတွင် အမည်ခံခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။
သို့သော် သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်တွင် နိုင်ငံခြားသားများအား သာသနာပိုင်မြေ ၊ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးအတွက် ကန့်သတ်ထားသည့်မြေ၊ အမှုအခင်းဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြောင့် မြို့ပြလူနေထိုင်မှုတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်စေသော အရပ်ဒေသများတွင်ရှိသော
မြေများမှလွဲ၍ ကျန်မြေယာများ ငှားရမ်းခွင့်ပေးခဲ့သည်။ ကျန်မြေများကို နှစ် ၃၀ နှင့် ထပ်တိုး ၁၅ နှစ်စီ နှစ်ကြိမ် စုစုပေါင်း နှစ် ၆၀ ငှားရမ်းခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။
အလားတူ ငွေလဲနှုန်းကိုလည်း တစ်ဒေါ်လာလျှင် ခြောက်ကျပ်အစား ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစတင်၍ ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးနှင့် အနီးစပ်ဆုံးနှုန်းရှင်ဖြင့် နေ့စဉ်သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။
ထို့ကဲ့သို့ နိုင်ငံခြားသားများ လုပ်ကိုင်နိုင်စေရန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပြောင်းလဲပေးလိုက်သော်လည်း နာမည်ခံလုပ်ကိုင်နေသူများမှာ လျော့မသွားပဲ ပိုမိုတိုးပွားလာလျက်ရှိသည်။
ထိုသို့များပြားနေခြင်းမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင် နိုင်ငံခြားသားအား မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရာတွင် တစ်ရာရာခိုင်နှုန်း ခွင့်မပြုခြင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသားအမည်ခံခိုင်းမှုများ ဆက်လက်ရှိနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း လုပ်ငန်းရှင်အချို့ကဆိုသည်။
“အမည်ခံလုပ်ပေးတဲ့လူအများစုက အမျိုးသမီးတွေများတယ်။ Living Together (လက်မထပ်ဘဲအတူနေခြင်း) နေတယ်။ ရုံးအလုပ်လေး၊ ဘာလေး ကူလုပ်ပေးရတယ်။ လစာပေးထားတယ်။ အကျိုးအမြတ်တော့ ခွဲမပေးဘူး”ဟု စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးကဆိုသည်။ ထိုကဲ့သို့ အမည်ခံပြီးလုပ်ကိုင်ပေးသော မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့် ဥပဒေကြောင်းအရ အရေးယူမှုခံရနိုင်သည်။
ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်တွင် ပြန်လည်ရေးဆွဲသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေတွင် နိုင်ငံခြားသားများအား ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းသာ အများဆုံးခွင့်ပြုထားသည်။
“အခွန်ရှောင်မယ်။ စိတ်ကြိုက်အလုပ်လုပ်မယ်။ အစိုးရကန့်သတ်ချက်ကျော်ပြီး လုပ်ချင်တာပေါ့။ ဘာ Responsibility(တာဝန်ယူမှု)မှမယူချင်ပဲ အခြေအနေမကောင်းရင် ဆုတ်ပြန်လို့ လွယ်အောင်ပေါ့။ မြန်မာနိုင်ငံသားကို အမည်ခံခိုင်းတာ”ဟု Nature Dream ခရီးသွားကုမ္ပဏီမှ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဒေါ်စပယ်အောင်က နိုင်ငံသားအမည်ခံ ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သူ၏အမြင်ကိုပြောသည်။
ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းအပါအ၀င် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြီးသော လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအားနည်းမှုတို့ကြောင့် အခွန်ရှောင်ရန်နှင့် ငွေမည်းများကို ငွေဖြူလုပ်နိုင်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား အမည်ခံလုပ်ခိုင်းရခြင်းဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတစ်ဦးကဆိုသည်။
“ဖက်စပ်လုပ်တာလည်း သူတို့လှည့်ချင်တိုင်းလှည့်လို့ရတဲ့ မြန်မာလူမျိုးကို အမည်ခံသက်သက်နဲ့ လုပ်တာများတယ်။ ဒါအန္တရာယ်ရှိတယ်”ဟု စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးအေးကျော်ကထောက်ပြသည်။
ထို့အပြင် နိုင်ငံသားများအမည်ခံ ဖွင့်လှစ်ထားသည့်ကုမ္ပဏီအချို့သည် တိုင်းပြည်ပုံရိပ်ကျဆင်းစေသည့်လုပ်ငန်းများကိုပင် လုပ်ကိုင်မှုများရှိလာကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် အမည်ခံလုပ်ကိုင်ထားသော ခရီးသွားကုမ္ပဏီအချို့မှာ Night Tour များ လုပ်ဆောင်နေကြကြောင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်အချို့က ထောက်ပြပြောဆိုသည်။
အလားတူ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းတွင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသားအမည်ခံ နိုင်ငံခြားသားလုပ်ကိုင်မှုများစွာရှိသည်။ ဥပမာ ဂျပန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးက မြန်မာတိုင်းရင်းသူနှင့်ပေါင်းဖက်ကာ ထိုအမျိုးသမီးအမည်ဖြင့် မြေများလိုက်လံဝယ်ယူရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်။ ထိုသို့ ၀ယ်ယူထားပြီး နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများဖြစ်ပွား၍ စ,သုံးလုံးကစစ်ဆေးစဉ် အမျိုးသမီးငယ်က တိုက်ပေါ်မှခုန်ချ၍ မိမိကိုယ်မိမိသတ်သေသည့် ဖြစ်ရပ်မျိုးဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ယခုလောလောဆယ်မှာပင် သီလ၀ါဆိပ်ကမ်းအနီး မြေကွက်ဝယ်ယူရာတွင် အမည်ခံခိုင်းထားသော မြန်မာနိုင်ငံသားထွက်ပြေးသဖြင့် ပိုင်ရှင်ဂျပန်နိုင်ငံသားက ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်တွင် သက်ဆိုင်ရာသို့ တိုင်ကြားအမှုဖွင့်ထားသည်။
ထိုသို့ နိုင်ငံသားအမည်ခံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို “လိမ်လည်မှု၊ စာချုပ်စာတမ်းဖောက်ဖျက်မှု၊ ဌာနဆိုင်ရာကို မမှန်မကန်လုပ်မှု၊ ငွေကြေးခ၀ါချမှု၊ အဂတိလိုက်စားမှုတို့နဲ့ အရေးယူလို့ရတယ်”ဟု မည်သို့အရေးယူနိုင်ကြောင်း Internatioal Law Firm မှ ရှေ့နေဦးသန်းမောင်က အောက်ပါအတိုင်းပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်အပါအ၀င် ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးသည့်ဌာနတို့က အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး အရေးယူမှုများလည်းရှိသည်။ သို့သော် ထိုအခြေအနေကို အမည်ခံပြီးလုပ်ကိုင်ပေးနေသူအများစုက မသိရှိကြပေ။
ဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်သော အစိုးရအဖွဲ့တက်လာပြီးနောက် နာမည်ခံလုပ်ငန်းများအား ပိုင်ရှင်မှန်အမည်ပြောင်းရန် တရားဝင်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သဖြင့် လုပ်ငန်းအချို့မှာ အမည်ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်မှုများရှိခဲ့သည်။
သို့သော် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အားနည်းနေမှုနှင့် ၀န်ကြီးအချို့၏ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုများရှိနေသဖြင့် အမည်ခံလုပ်ငန်းများမှာ လျော့မသွားပဲ ဆက်လက်တိုးပွားနေခြင်းဖြစ်သည်။
“နိုင်ငံခြားသားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင် လုပ်ဖို့လို့တယ်”ဟု နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ စီးပွားရေးအကြံပေး ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်ကအကြံပြုသည်။
ထို့အပြင် သက်ဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များအနေဖြင့်လည်း အမည်ခံလုပ်ကိုင်နေသူများကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနသို့ သတင်းပေးတိုင်ကြားမှုများ လုပ်ရန်လိုကြောင်း ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်အချို့ကဆိုသည်။
အမည်ခံရင်းနှီးမြှုနှံမှုများပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် နိုင်ငံတော်အတွက် ရရှိမည့်အခွန်ငွေများဆုံးရှုံးခြင်း၊ အဆိုပါလုပ်ငန်း၌ လုပ်ကိုင်နေသော အလုပ်သမား၊ ၀န်ထမ်းများ အခွင့်အရေးရပိုင်မှု ဆုံးရှုံးခြင်း၊ လုပ်ငန်းတူ နိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်လည်း တရားမ၀င်နောက်ကွယ်မှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကြောင့် ငွေကြေးအင်အားမယှဉ်နိုင်ဘဲ အခွင့်အလမ်းများဆုံးရှုံးခြင်း၊ ထုိ့အပြင် တိုင်းပြည်၏ တရားဝင်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုကိုပါ အတားအဆီးများဖြစ်နိုင်ကြောင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များက ပြောကြားသည်။
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအရ နိုင်ငံခြားသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ပါက အခွန်အခများ စနစ်တကျပေးဆောင်နေသည့်အပြင် လူမှုဘ၀တာဝန်ယူမှု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုများ မဖြစ်စေရေး စသည့်သတ်မှတ်ချက်များ ပါဝင်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးနှင်းဦးကပြောသည်။
နိုင်ငံခြားသားများက မြန်မာနိုင်ငံသားများအား အမည်ခံလုပ်ကိုင်စေမှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နစ်နာမှုများ များစွာရှိသည်။ ထိုအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ ဦးတေဇက ယခုလို မှတ်ချက်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
ကျောက်စိမ်းအဓိကထွက်သော ဖားကန့်နှင့် မြစ်ကြီးနားမှာ အခုချိန်ထိ မတိုးတက်သော်လည်း တရုတ်နိုင်ငံ ကွမ်ဂျိုးခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့သုံးမြို့မှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားပြီဟူ၍ဖြစ်သည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 2/26/20140အကြံပြုခြင်း
၈၈ အာဏာသိမ်း၊ ၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး စစ်တန်းလျား ပြန်လိုခဲ့သော်လည်း မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဇာတ်ခုံပေါ်မှ ရုတ်တရက် ပျောက်ကွယ်ခဲ့သူ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင်(ငြိမ်း)၏ မိသားစု ဘဝကောက်ကြောင်း သားဖြစ်သူနှင့်ပုံဖော်ခြင်း
စင်္ကာပူ ကျောင်းသား ၅၈ ယောက်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ ဆုံဆွေးနွေး
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက် ညနေ ၅ နာရီ အချိန်တွင် နေပြည်တော် ရိုင်ရယ် ကုမုဒြာ ဟိုတယ်ရှိ အစည်းဝေးခန်းမဆောင်တွင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် Dr. Suzaino Kadin နှင့် Prof. Eduardo Araral ဦးဆောင်သော စင်္ကာပူ နိုင်ငံ Lee Kuan Yew School of Public Policy မှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက် လေ့လာသော ကျောင်းသား ၅၈ ယောက်ကို ပြည်သူလွှတ်တော် ကိုယ်စားများ နှင့်အတူ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပက်သက်၍ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။
ကရင်မှာ သစ်ခုတ်ရင်း ကြီးပွားလာတဲ့ Htay Family က သူဌေး ဦးလှဌေး
ကိုယ်ပိုင် ပြည်နယ်အဖြစ် ရှမ်းပြည်မှ ခွဲထွက်လို
ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရဲ့ အမိန့်ရှိတဲ့အတိုင်း ဖျက်ပြီးတော့ ....လို့ဆိုတယ်။။
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီဓာတ်သတ္ထုတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းခွင်ဧရိယာအတွင်းတွင် ပါရှိသော လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး သိမ်ကျောင်းနှင့် စေတီတော်တို့အား ညောင်ပင်ကြီး-ယင်းမာပင် ကားလမ်းဘေးသို့ ပြောင်းရွှေ့တည်ထားကိုးကွယ်ရန် နိုင်ငံတော်သံဃနာယက ဆရာတော်ကြီးများထံမှ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်က သြ၀ါဒခံယူခဲ့ရာ ဆရာတော်များ၏ သဘောတူလက်ခံချက်အရ ပြောင်းရွှေ့ရေးကော်မတီမှ မကြာမီပြောင်းရွှေ့တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း
လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ သိမ်ကျောင်းနှင့် စေတီတော်အား ညောင်ပင်ကြီး-ယင်းမာပင် ကားလမ်းဘေးသို့ ရွှေ့ပြောင်းမည်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ယင်းမာပင်ခရိုင် ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းရှိ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီဓာတ်သတ္ထုတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းခွင်ဧရိယာအတွင်းတွင် ပါရှိသော လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး သိမ်ကျောင်းနှင့် စေတီတော်တို့အား ညောင်ပင်ကြီး-ယင်းမာပင် ကားလမ်းဘေးသို့ ပြောင်းရွှေ့တည်ထားကိုးကွယ်ရန် နိုင်ငံတော်သံဃနာယက ဆရာတော်ကြီးများထံမှ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်က သြ၀ါဒခံယူခဲ့ရာ ဆရာတော်များ၏ သဘောတူလက်ခံချက်အရ ပြောင်းရွှေ့ရေးကော်မတီမှ မကြာမီပြောင်းရွှေ့တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“အစီရင်ခံစာမှာ ပါတဲ့အတိုင်း လက်ရှိ သိမ်ကျောင်းနှင့် စေတီတော်ကို မူလအနေအထားမပျက် ပြောင်းရွှေ့မှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနေ့ သြ၀ါဒခံယူတဲ့ ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရဲ့ အမိန့်ရှိတဲ့အတိုင်း ဖျက်ပြီးတော့ ရရှိလာတဲ့ ဌာပနာတွေကအစ မြေမှုန်ပါမကျန်ရအောင် အကုန်ယူပြီး ရွှေ့ပြောင်းတည်ထားမယ့် စေတီတော်အသစ်မှာ ဌာပနာတွေအဖြစ် ထည့်သွင်းသွားမှာပါ။ ပြောင်းရွှေ့မယ့်ရက်ကတော့ အတိအကျ မသတ်မှတ်ရသေးပါဘူး။သာသနိကအဆောက်အအုံများ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပြီး မကြာမီ ပြောင်းရွှေ့သွားမှာပါ။ ယခုစေတီတော်နဲ့ သိမ်ကျောင်းတို့ထက် ဥာဏ်တော်မြင့်ပြီး တည်ဆောက်သွားမှာပါ”သာသနာရေးဒုဝန်ကြီး ဦးစိုးဝင်းက ပြောကြားသည်။
ရွှေ့ပြောင်းရမည့် သာသနိကအဆောက်အအုံများစာရင်းမှာ ဥာဏ်တော် ၂၇ ပေရှိ စေတီတော်တစ်ဆူ၊ အလျား ၂၃ ပေ၊ အနံ ၁၈ ပေ၊ အမြင့် ၁၅ ပေရှိ သိမ်ကျောင်းဆောင် တစ်ဆောင်၊ အလျား ၂၀ ပေ အနံ ၁၆ ပေ၊ အမြင့် ၁၅ ပေရှိ ဂန္ဓကုဋိကျောင်းဆောင် တစ်ဆောင်၊ ၇၂ ပေပတ်လည်ရှိ မဟာရံအုတ်တံတိုင်းနှင့် အ၀င်မုခ်ဦးတို့ ပါရှိကြောင်း သိရသည်။
ယခုရွှေ့ပြောင်းမည့်နေရာနှင့် မူလနေရာတို့မှာ ကိုက် ၁၅၀၀ ခန့် ကွာဝေးပြီး ကျော်ရွာ၏တောင်ဘက် ပေ ၃၀၀ ခန့်အကွာ ညောင်ပင်ကြီး-ယင်းမာပင် ကားလမ်းဘေး အလျား ၄၀၀ ပေ၊ အနံ ၂၀၀ ပေရှိ မြေနေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့မည်ဖြစ်ပြီး ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ၁၃-၁၂-၂၀၁၃ ရက်စွဲပါ အမိန့်ဖြင့် အခွန်လွတ်သာသနာ့မြေဂရမ် ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် ရွှေ့ပြောင်းပြီးပါက သာသနိက အဆောက်အအုံများတွင် မူလအလှူရှင်နှင့် ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့သည် အလှူရှင်များ၏ အမည်ကို ကမ္ပည်းထိုးပြီး ကမ္ဘာတည်နေရာပြစနစ် (GPS) ဖြင့်တိုင်းတာထားပြီး မူလတည်ရှိနေရာ သာသနိကအဆောက်အအုံများ ၏နေရာအမှန်ကိုလည်း ကျောက်စာတွင် ထည့်သွင်းထားမည်ဖြစ်ကြောင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ၀န်ကြီးတစ်ဦးထံမှ သိရသည်။
(လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ သိမ်ကျောင်းနှင့် စေတီတော်တို့အား ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်းက တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-ဖြိုးဝေ))
လွှတ်တော်ထဲမှာမူးယစ်ရာဇာ ၆ ဦးက အမတ်ဖြစ်နေ
By Khin Nyein Thit
မနေ့က တအာင်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့ပွဲကိုသွားတော့ မူးယစ်ဆေးဝါးကိစ္စတွေကို သိလာရတယ်။ မူးယစ်ရာဇာတွေကို အစိုးရတပ်က အကာအကွယ်ပေးနေတယ်။ ၂၄ ရက်နေ့က TNLA က ဘိန်းခင်းတွေကို ၀င်ဖျက်လို့ ပန်းဆေးပြည်သူ့စစ်နဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။ အံသြစရာပဲ တပ်မတော်က ပန်းဆေးပြည်သူ့စစ်ဘက်ဝင်တိုက်တယ်။ ဘိန်းခင်းကို အကာအကွယ်ပေးနေတယ်။ လွတ်တော်ထဲမှာမူးယစ်ရာဇာ ၆ ဦးက အမတ်ဖြစ်နေတယ်။ ပလောင်လူငယ် ၉၁% ကမူးယစ်ဆေးဝါးရဲ့ သားကောင်ဖြစ်နေတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေက ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာ ဘိန်းလာစိုက်ကြတယ်။ ပလောင်တွေ စီးပွားပျက်အောင်လို့ တရုတ်ကနေ လက်ဘက်တွေတရားမ၀င်ဝင်လာတယ်။ အကေက်အခွန်ဌာနက ငွေယူပြီး မသိသလိုနေတယ်။ ပလောင်တွေ လေက်ဘက်ဈေးကွက်ပျက်တော့ ဘိန်းခင်းတွေမှာ အလုပ်လုပ်နေကြရတယ်။ ဘယ်လိုလဲ အစိုးရမင်းတွေရယ်။ ပြောလိုက်ရင် လေကြီးမိုးကြီူးတွေကြီးပဲ တိုင်းပြည်ကို အဖတ်မဆယ်ပဲနဲ့ ပျက်အောင်ဖျက်နေတယ်။
- ပြည်ခိုင်ဖြိုးသည် အင်အား၊အရည်အချင်း၊စိတ်စေတနာ၊ အတွေ့အကြုံနဲ့အခြေအနေဖန်တီးနိုင်ခွင့်များ သာလွန်ကောင်းမွန်
- ဇာတိကိုချစ်မြတ်နိုးစိတ်၊ နိုင်ငံကိုချစ်မြတ်နိုးစိတ်ရှိ သူတိုင်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးကို အားပေးသည်။
ကျွန်မကတော့ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊မိုးစွေအုပ်စု၊မိူးစွေကျေးရွာသူ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မဟာ သမိုင်းဘာသာနဲ့ ဘွဲ့ရပြီး တောင်သူ လုပ်ကိုင်နေ သူတစ်ဦးဖြစ်ပါ တယ်။ ကျွန်မ မိသားစုပြည့်ပြည့်စုံစုံ ၊အေးအေး ချမ်းချမ်းမပူမပင်နေချင်တယ်။ မိသားစုလူနေမှုဘ၀မြင့်မားချင်တယ်။ ကျွန်မလိုပဲ အခြားရွာသူရွာ သားများ ကိုလည်း သက်တောင့်သက်သာ ဘ၀ မျိုးမြင် ချင်ပါတယ်။ ဒီရွာမှာမွေး၊ ဒီရွာမှာကြီး ဒီရွာမှာဘဲ ပညာတွေသင်ခဲ့လို့ ဇာတိကိုချစ်တဲ့စိတ်၊ မြန်မာကို ချစ်စိတ်ပြင်းပြပါ တယ်။ နိုင်ငံတော်ရဲ့အကျိုးကိုလည်း ကျွန်မတတ်နိုင် သည့်ဘက် မှ လုပ်ဆောင်ပေး လိုစိတ်၊ တာဝန်ကျေချင်စိတ်ရှိပါ တယ်။ နိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတည်ဆောက်မှုမှာပါဝင်ချင်လို့ ဘာလုပ်ရမလဲလို့ ကျွန်မအကြိမ်ကြိမ်စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးကိုတွေ့ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ နိုင်ငံတော်ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်၊အေးချမ်းတည်ငြိမ်အောင် တည်ဆောက်နိုင်တဲ့ အဖွဲ့ဟာ (၁)ဖွဲ့ပဲရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါပဲ။ ဘာတွေ ထူးခြားနေ လို့လဲဆိုတော့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးစာ အခြားအဖွဲ့များထက် အင်အား၊ အရည်အချင်း၊ စိတ်စေတနာ၊အတွေ့အကြုံနဲ့ အခြေအနေဖန် တီးနိုင်မှုစတဲ့ အချက်များသာလွန်လို့ဖြစ်ပါတယ်။
အင်အားအနေနဲ့ ကျွန်မတို့ရွာ၊မြို့နယ်ကစလို့ တစ်နိုင်ငံလုံး မှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်အင်အားဟာ အခြားပါတီအဖွဲ့များထက် အဆများ စွာများပါတယ်။ နိုင်ငံတော်မှာ ပါတီဝင်အင်အား အများဆုံးပါတီဖြစ်ပါတယ်။ အင်အားသာပါတယ်။
အရည်အချင်းအနေနဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဟာ ရပ်/ကျေး၊မြို့နယ်၊ ခရိုင်၊ တိုင်းဗဟို အဆင့်အားလုံး စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားပြီး ပါတီဝင်များအရည် အချင်းပြည့်ရေးအစဉ်လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးနေပါတယ်။ ပါတီ အကြီးအကဲ များကလည်း တစ်ဦးချင်းရော၊အဖွဲ့လိုက်ပါ ဘယ်ပုဂိုလ်၊ ဘယ် အဖွဲ့နဲ့မှမယှဉ်နိုင်တဲ့အရည်အချင်း များ ရှိကြပါတယ်။ပါတီဝင်တစ်ဦးချင်းရော ၊ပါတီအဆင့်ဆင့်ကော်မတီများရော အခြားပါတီအဖွဲ့များထက်အများကြီး သာပါတယ်။ အရည်အချင်းသာပါတယ်။
စိတ်စေတနာနဲ့ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဟာ ပြည်သူ့အကျိုး ၊ဒေသ အကျိုး လုပ်ချင်တဲ့စိတ်စေတနာကောင်း၊ စိတ် စေတနာမှန်ရှိတဲ့ ပြည်သူများ နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူများထဲက ပြည်သူများဖြစ်တဲ့ ပါတီဝင်များ ဟာ ယုံကြည်ချက်၊ ခံယူချက်နဲ့ ပြည်သူ့အကျိုးဖော်ဆောင်ပေး လို့ စေတနာမွန်မြတ်ပါတယ်။ဖြူစင်သန့်ရှင်းပါ တယ်။ အခြားပုဂိုလ်အချို့ကတော့ ရလိုမှုကိုခံစားချက်တွေ နာကြည်းချက် ဒေါသ အာဃာတ အငြိုးအတေး ဂလဲ့စားတွေနဲ့လုပ်နေတာ လည်း တွေ့နေရပါတယ်။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရဲ့စိတ်ကောင်းစေတနာမှန်လို့ ပြည်သူ့အ ကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ အောင်မြင်နေပါတယ်။ စိတ်စေတနာသာပါတယ်။
အတွေ့အကြုံအနေနဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးဟာ အသင်းဘ၀၁၉၉၃ခုနှစ် ကတည်း က ယနေ့အထိ ပြည်သူ့အကျိုး သယ်ပိုးခဲ့တဲ့ အစဉ်အလာရှိလို့ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံ့အကျိုး၊ပြည်သူ့အကျိုးထမ်းဆောင် ပြီး ရရှိပြီးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံ့အကျိုး ပြည်သူ့အကျိုး ထမ်းဆောင်ပြီး ရရှိပြီးအတွေ့အကြုံ ကောင်းများကို အခြေခံဆောင် ရွက်နေကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ အခြားပါတီအဖွဲ့များကတော့ ဘာလုပ် ရမှန်းမသိ။တည်ဆောက်ရေးအတွေ့အကြုံမရှိတာကိုတွေ့နေရပါတယ်။
အခြေအနေဖန်တီးနိုင်ခွင့်ကတော့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဟာ ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲအများဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ အနိုင်ရ ပါတီဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နေရာ၃၁၄နေရာမှာ ၂၅၉နေရာ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ၁၅၉နေရာ မှာ ၁၂၉နေရာ တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်လွှတ်တော်၆၃၉နေရာမှာ ၄၉၄နေရာ စုစုပေါင်း၁၁၁၂နေရာမှာ ၈၈၂နေရာ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ဦးဆောင်ပါတီဖြစ်ပါတယ်။ လွှတ်တော်အဆင့်ဆင့်တိုင်းမှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်ကိုယ်စားလှယ်များ အများဆုံးရှိပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များမှလည်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းဒေသကြိး ၊ပြည်နယ်ပါတီဥက္ကဌများဟာ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်များဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးကသာ အခြေအနေမှန်တီးနိုင်စွမ်းအများဆုံးရှိပါတယ်။အခြေအနေဖန်တီးနိုင်ခွင့်သာပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျွန်မနိုင်ငံအကျိုး၊ ပြည်သူ့အကျိုး၊ဒေသ အကျိုးကို ဆောင်ရွက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ရပ်/ကျေးပါတီဝင်လူငယ်တာဝန်ပေးအပ်ခံရပြီး ဒေသအကျိုး ပြည်သူရဲ့ အကျိုးကို တက်တက်ကြွကြွ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရ ပါ တယ်။ ဆောင်ရွက်နေ ပါတယ်။ ဒေသခံလူငယ်များဟာလည်း ကျွန်မနဲ့အတူ ပါဝင်ဆောင် ရွက်နေကြပါတယ်။
နိုင်ငံ့အကျိုးကို အစဉ်သယ်ပိုးချင်ရင် ပါတီဟာအရှည်သဖြင့် ဦးဆောင်ပါတီအဖြစ်ရရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဦးဆောင်ပါတီဖြစ်ဖို့အနီးဆုံး ၂၀၁၅ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးကို စွမ်းစွမ်းတမံ ကြိုးပမ်းဆောင် ရွက်ပါမည်။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအောင်မည်ဟု ကျွန်မယုံကြည်ပါသည်။
ဟိ ဟိ သူများရေးပေးတာ လာဖတ်ပြနေတယ် နည်းနည်း ပါးပါးတောင် စကားလို မပြောတတ်ဘူး စာလိုဘဲ ဖတ်ပြနေတယ် အနှစ်မဲ့တဲ့ ကျီးအာသီးလိုဘဲ
ဒီလိုစာဖတ် နေတဲ့ပုံကြီး ဘာလို့ ရှယ်တာလဲ။
မပြောင်းဘူးကွယ် အနှစ် နှစ်ဆယ်
သနားစရာကောင်းလိုက်တဲ့ ခလေးမ။ သူဘာပြောနေမှန်းတောင် သူသိပုံမရဘူး။ စဉ်းစားစရာတခုပေါ်လာတာက သူ ဦးနှောက်အထုတ်ခံရပြီးမှ ဘွဲ့ရတာလား။ ဘွဲ့ရပြီးမှ ဦးနှောက်အထုတ်ခံရတာလားဆိုတာပါ
Zaw Naing Linn
ကျွန်မဟာ သမိုင်းဘာသာနဲ့တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကို၁၀ရက်တည်းနဲ့ကျောင်းတက်ပြီး ဘွဲ့ရပြီး ဖြစ်ပေမဲ့အခုမိသားစုစားဝတ်နေရေးကြောင့်နေ့တွက်၆၀၀၀/ကျပ် နဲ့သူများရေးပေးထားတဲ့ဘာမှန်းမသိတဲ့ရူးကြောင်ကြောင်အမှန်တခုမှမပါတဲ့စာကိုလာဖတ်ပေးနေရတာ နားလည်ပေးပါရှင် မကြာခင်ဒုတိယအသုတ်မှာ တရုတ်ပြည်ကို အိမ်ဖော်အလုပ်ရမယ်ဆိုလို့ဖတ်ပေးရတာနားလည်ပေးပါရှင်။အိမ်ဖော်အလုပ်ပေးမဲ့ပါတီကိုကျေးဇူးဆပ်တာပါ။
သမီးကြည့်ရတာ ဂျာနယ်မဖတ်ဘူး။ သတင်းစာဖတ်တယ်။
INTERNET မလေ့လာဘူး ဘပြောင်TVပဲကြည့်တယ်။
ရန်ကုန်မရောက်ဖူးဘူး နေပြည်တော်ပဲ လေ့လာတယ်။
တစ်နပ်စား ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုတော့ သူရဲကောင်းသဖွယ်အားကျနေမယ်ထင်မိတယ်။
ငယ်တဲ့သူဆိုတော့ ဦးလည်း ဆက်မရေးချင်တော့ဘူးသမီးရယ်။
အော်......အ၀တ်အစားနဲ့ အခေါ်အဝေါ်ဘဲ ပြောင်းသွားတာ - အရင် က လမ်းစဉ်လူငယ် အတိုင်းပါဘဲလား ...။ ပြောခိုင်းတာဘဲ ဖတ်နေရတယ်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ ကွဲလွဲမှု မဖြစ်သေးဘူး။ မသေခင် အပြောင်းအလဲ မြင်ချင်ပြီဗျို့ .......။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အုပ်ချုပ်မှုမြို့တော်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော နေပြည်တော်သို့ အမြန်လမ်းမကြီးမှတစ်ဆင့် လာရောက်ပါက ဦးစွာတွေ့ရှိရသော ကံ့ကော်ပန်းအ၀ိုင်းအနီးတွင် လှပခံ့ညားလှသည့် အဆောက်အအုံကြီးတစ်ခုက ဆီးကြိုနေမည်ဖြစ်သည်။
မြေဧကပေါင်းများစွာကျယ်ဝန်းသည့် မြေဧရိယာအတွင်း ခေတ်မီဒီဇိုင်းများဖြင့် ဆောက်လုပ်ပုံဖော်ထားသည့် အဆောက်အအုံကြီးမှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကြီးမားဆုံးပါတီဌာနချုပ်ရုံးဟူ၍ပင် ခေါ်ဆိုနိုင်မည့် ငွေကျပ်သန်းပေါင်းများစွာ အကုန်အကျခံတည်ဆောက်ထားသော ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီပိုင်
ထိုကဲ့သို့ ခမ်းနားလှသည့်အဆောက်အအုံကြီးကို တည်ဆောက်နိုင်သည့် ငွေကြေးပမာဏသာမက ထို့ထက်များပြားလှသည့် ငွေကြေး၊ အဆောက်အအုံ၊ လုပ်ငန်းများပိုင်ဆိုင်ထားသည့် ပါတီကြီး၏ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုများသည် မည်ကဲ့သို့ရရှိလာပါသနည်းဟူသော မေးခွန်းမှာ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလများတွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးအနေဖြင့် မဖြစ်မနေဖြေရမည့် ၂၀၁၀ ကပင် တင်ကျန်ခဲ့သည့် မေးခွန်းကြွေးဖြစ်သည်။
အသင်းပိုင်အဆောက်အအုံများ၊ ငွေကြေး၊ လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်မှုများသည် ယခင်အစိုးရက ပြည်သူများပိုင်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းငွေကြေး၊ ဘဏ္ဍာများကို လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်၍ ယခုလက်ရှိပါတီပိုင်ဖြစ်နေသော ဓနဥစ္စာများသည် ပြည်သူပိုင်များပင်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံရေးလေ့လာသူအချို့က ဝေဖန်ပြောကြားသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန ရုံးတစ်ရုံးထက်ပင် ပိုမိုခမ်းနားကြီးကျယ်သော အသင်းဌာနချုပ်ရုံး၏ ဆောက်လုပ်ကုန်ကျမှုစရိတ် မည်ရွေ့မည်မျှရှိခဲ့သည်ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ အသင်းမှပါတီအဖြစ်ကူးပြောင်းချိန်တွင် အဆိုပါဌာနချုပ်ရုံးအပါအ၀င် အသင်းပိုင်လုပ်ငန်းများ၊ ငွေကြေးများအားလုံးကို ပါတီမှလက်လွှဲရယူခဲ့သည်။
အငြင်းပွားစရာမဲရလဒ်များထွက်ပေါ်ခဲ့သည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တစ်ခုတည်းတွင်သာ အသာရခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲ။ စီးပွားရေးနယ်ပယ်တွင်လည်း အခြားနိုင်ငံရေးပါတီများထက် အသာရခဲ့သည်။
ထိုဘဏ္ဍာရေးအားသာချက်က နောင်လာမည့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးအတွက် အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း ၎င်းတို့ကပြောသည်။
အစိုးရသစ်လက်ထက် ဝေဖန်မှုများစတင်မှ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဥပဒေဘောင်အတွင်းက ဆောင်ရွက်ခဲ့ဖြစ်ကြောင်း တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
နယ်မြို့ကြီးများတွင် ပြေးဆွဲနေသည့် အဝေးပြေးယာဉ်လိုင်းအချို့မှာလည်း ပါတီပိုင်ယာဉ်လိုင်းများပင်ဖြစ်သည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမစမီ ၁၇ နှစ်ခန့်အလိုကတည်းက တပ်မတော်ထိပ်တန်းအရာရှိကြီးများနှင့် ဖွဲ့စည်းထားခဲ့ပြီး နိုင်ငံပိုင်အဆောက်အအုံများ၊ အားကစားကွင်းများ၊ အသုံးပြုခွင့်ရရှိခဲ့သည့် ပြည်ခိုင်ဖြိုးအသင်းသည် ပါတီအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားသော်လည်း ထိုအခွင့်အရေးဆက်လက်ရရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ဝေဖန်မှုများလည်းရှိသည်။
အဆိုပါအဆောက်အအုံများအနက် အချို့သည် အခမဲ့ဆေးကုခန်းများ ဖြစ်သွားကြသည်။ ဝေဖန်မှုအချို့က ပြည်ခိုင်ဖြိုး၏ဆေးခန်းများသည် အမှန်တကယ်အလုပ်မဖြစ်ဘဲ ရန်ကုန်မြို့လယ်အပါအ၀င် အကွက်အကွင်းကောင်းသည့်နေရာများတွင် မြေနေရာဦးရုံသက်သက်သာဖြစ်သည်ဟုပြောသည်။
အမှန်တကယ်ပင် မူလပိုင်ဆိုင်သူများထံမှ တန်ရာတန်ကြေးပေး၍ ၀ယ်ယူထားခဲ့ခြင်းဟုတ်ပါသလား။ ထိုမေးခွန်းကို စနစ်တကျဝယ်ယူခဲ့ခြင်းမဖြစ်နိုင်ကြောင်း နိုင်ငံရေးပါတီအချို့မှ ပုဂ္ဂိုလ်အချို့ကပြောကြားသည်။
“ကျွန်တော်တို့တုန်းကလည်း တိုင်တာတွေ၊ တောတာတွေရှိတယ်။ အဲဒီတော့ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီကို ကူးပြောင်းတဲ့ဟာတွေ ရှင်းလင်းပြရတာပေါ့။ အခုတော့ အာဏာရပါတီပြည်ခိုင်ဖြိုးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ သူတို့က ကျွန်တော်တို့ကို ရှင်းပြတာမျိုးမတွေ့ရဘူး”ဟု ဦးခင်ဇော်ကပြောသည်။
ယင်းအစဉ်အလာကို ပြည်ခိုင်ဖြိုးဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းရှိ၊ မရှိကို မဲဆန္ဒရှင်များက ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးက အခြားပါတီများထက် နှာတစ်ဖျားသာမသာကိုတော့ ရွေးကောက်ပွဲအဖြေမဲရေတွက်ပြီးချိန်အထိ စောင့်စားရဦးမည်။
CRITICAL THINKING ပြီးပြောရရင်နှမြောစရာ
ပြည့်တန်ဆာ တိုက်ဖျက်ရေးမှာ ဖာခေါင်းကို ဥက္ကဌ ခန့်ထားသလို
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုပပျောက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဌကြီးက အမြောက်တပ်ညွှန်မှူးဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်မြ၀င်း(ငြိမ်း)ဆိုတာ တွေ့လိုက်ရတော့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဧရာဝတီ ဘလော့မှာပါခဲ့ဖူးတဲ့ ပေးစာတစ်ခုကို ပြေးသတိရမိတယ်။ မဖတ်ဖူးသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် အောက်က ကွန်မန့်တွေ ကိုပါ ကူးယူဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ မူရင်းပို့စ်ကိုတော့ http://blog.irrawaddy.org/2011/09/blog-post_8099.html မှာ သွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါကြောင်း-
ပေးစာ - ဗိုလ်ချုပ်မြ၀င်း (သို့) ဗိုလ်မြ၀ါး
လူတိုင်းအပေါ် စားရ၀ါးရမှ နေရာပေးသော၊ ရာထူးပေးသော၊ အရည်အချင်းကိုမကြည့် ငွေတွင်းကိုသာ ကြည့်သော ဗိုလ်ရှုပ် တယောက် ဖြစ်ပါသည်။
တချို့သော တိုင်းမှူးများနှင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများမှာ တာဝန်ကျသော ၂ နှစ် ၃ နှစ်ခန့်တွင်သာ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး တခုတည်း၌ မြေကွက် ရယူပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ ရောင်းဝယ်ခွင့် ရရှိခဲ့သည်။ သို့သော် ဗိုလ်မြ၀ါး တယောက်မှာမူ တပြည်လုံးရှိ အမြောက်တပ်ဖွဲ့များမှ တပ်ရင်း၊ တပ်မ နေရာများကို ကြိုက်ဈေးရမှ ရာထူး နေရာပေးကာ လေလံမြင့်မှ ရာထူး တိုးမြှင့်စေခြင်း၊ နေရာကောင်းများသို့ ပြောင်းရွှေ့စေခြင်းများဖြင့် လေလံကြေး မြင့်မားစွာ ခွဲတမ်းနှင့် နေရာယူ ရောင်းစားခဲ့သည်မှာ ဆယ်စုနှစ်တခုပင် စွန်းနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။
တိုင်းမှူးများနှင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများမှာ မြေကိစ္စ အနည်းငယ်ဖြင့် အနားယူ ရခြင်း၊ အပြစ်ပေးခြင်းခံရသော်လည်း မြ၀ါးမှာမူ ပန်းပန်လျက် ရှိပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင် အိမ် ၆ လုံး၊ နေပြည်တော်တွင် family house အပါအ၀င် ၆ လုံး၊ အောင်ပန်းမြို့တွင် အိမ် ၁၃ လုံးနှင့် အခြားမြို့များတွင်လည်း များစွာ …။ ရာဘာခင်းများ သောင်းချီကာ့့။
တပည့်များမှာလည်း စစ်အာဏာရှင် ဗိုလ်မြ၀င်း၏ဒဏ် မခံနိုင်၍ အရပ်ဖက်ထွက်၊ အငြိမ်းစားယူ၊ နိုင်ငံရေး ခိုလှုံသွားခြင်းများရှိကာမူ ရယ်မောလျက်ပင် ရှိနေပါသည်။ တပ်မတော်တွင် အသက်ပြည့် သွားသော်လည်း တပ်ဖွဲ့၏ စစ်ခေါင်းဆောင်၊ အကြံပေး အဖြစ် ဆက်လက် တာဝန်ယူ ထမ်းဆောင်နေဦးမည်ဟု ကြွေးကြော်နေသည် မှာလည်း အံသြစရာကောင်းသော အချက်တခု ဖြစ်ပါသည်။
စစ်ခေါင်းရှောင်ကြီးများမှ မျက်စိမှိတ်၊ နားပိတ်နေခြင်းအပေါ် ဘာယတြာကောင်းနေ သလဲလို့ သံသယ၀င်ကာ ထူးခြား အံသြ မှင်သက်လျက်ရှိကြပါကြောင်း။
နတ်ကတော် မြ၀င်းတယောက် ဖိဖားတဲ့နေရာမှာ သူ့အဖေချိုကုပ်တွေနဲ့ နင်လား ငါလားပါပဲ။ သူ့အိမ်မှာ လက်အောက်ငယ်သားတွေနဲ့ တွေ့တဲ့ အခါ ကြမ်းပြင်မှာပဲ ထိုင်ခိုင်းလေ့ရှိပါတယ်။ ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာ။ ကက(မ) (ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အမြောက်တပ်ဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး) က G3, G2, G1 တွေကလဲ သခင်အားရ ကျွန်ပါးဝဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ မြ၀င်းအကြိုက် အရာရှိအချင်းချင်းကို ဖိနှိပ်တဲ့နေရာတွေမှာ သူမတူအောင် ထူးချွန်ကြပါပေတယ်။ ကက(မ)ကို တာဝန်နဲ့လာရတဲ့ အရာရှိတွေ G3 ရုံးခန်းမှာတောင် ထိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ မယုံဘူးဆိုရင် ကကမမှာ လက်ရှိ၊ အရင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ မာမီမြ၀င်းရဲ့ တပည့်တွေရဲ့နာမည်နဲ့တကွ ပြောပြမယ်။
သူပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့ ဆယ်ပုံတစ်ပုံတောင်မှ့ သတင်းမရလိုက်ပါလား။ ဧရာဝတီ ဘလောက်ခ့်တင်ထားတာနဲ့ဗိုလ်မြ၀င်းကြီ့းလက်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုက ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးပါ။ ထပ်စုံစမ်းပေးပါဦ့း kkm
ဒီလူ့အကြောင်းကို သိတဲ့လူနည်းတယ်။ အမြောက်တပ်ဖွဲ့ ဓါးမြ ဂိုဏ်ခေါင်းဆောင် ပါ။ ဓားမြဆိုလို့ တခြားလူကို တိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ အမြောက်တပ်ဖွဲ့ သား အချင်းချင်း လက်အောက်ငယ်သားဆီက ခေါင်းပုံဖြတ်တာ။ သူမကျေနပ်ရင် ဗိုလ်မှုးကြီး အဆင့်လည်း ကလေးလို လူပုံလည်မှာ ဂျွမ်းထိုးခိုင်းတယ်။ သူ့ရဲ့ အရည်အချင်းက "အာ" ကောင်း တယ်။ ယုံအောင်ပြောတတ်တယ်။ လူကြီးတွေကို မြေပုံထောက်ပြီး စာရွက်ပေါ်မှာ စီမံကိန်းတွေ နဲ့ စနစ်တကျ လိမ်တတ်တယ်။ "ကျ"သွားအောင်ပြောတတ်တယ်။ သူ့အကျိုးစီးပွါးအတွက် လိုအပ်တဲ့သူဆိုရင် ဖူးဖူးမှုတ် ပြီး ဖင်မူးတောင်းထောင်နေအောင် ကန်တော့တယ်။ အဲဒီ့သူဘဲ သူ့အကျိုးစီးပွါးအတွက် မလိုတော့ ဘူးဆိုရင် ခြေရာတိုင်းလို့ ရပြီဆိုရင် ချက်ချင်း မကောင်းတုတ်တယ်။ သူများမကောင်းကြောင်းကို အကောင်းပြော သလိုလိုနဲ့ လှလှပပ ချောက်တွန်းတတ်တယ်။ အယင် အမြောက်တပ်ဖွဲ့ ညွှန်မှုး ဗိုလ်ချုပ်ကြည်ဝင်းကို သူဘယ်လိုဆက်ဆံသွားတယ်ဆိုတာ မှီတဲ့သူတိုင်း သိကြတယ်။ သူအိမ်တွေ တော်တော်များများ ရှိတာလည်း အမှန်ဘဲ။ အဲဒီအိမ်တွေ ဆောက်ဖို့ တပ်ရင်းတွေက တပ်ရင်မှုးတွေကို သစ်၊ ငွေ ၊ ရွှေ စသည်ဖြင့် နည်းမျိုးစုံနဲ့ ညှစ်တယ်။ ယောင်္ကျားကို ပေးပြီးလို့ ပြီးပြီတော့မထင်နဲ့ အိမ်ကျရင် မိန်းမက ထပ်တောင်းတယ်။ မပေးလို့ကတော့ အမြောက်တပ်မှာ ထွက်ချင်စိတ် ပေါက်သွားအောင် လုပ်တယ်။သူဖားရမဲ့သူဆို သူက အကွက်စေ့အောင်ဖားတယ်။ သူဖားရမဲ့သူအိမ်ကိုများ ဖုန်းဆက်ပြီဆိုရင် မနေ့တနေ့ကမှ စကားတတ်တဲ့ ကလေးကိုပါ ဖုန်းပြောတာ။ တစ်ခါပြောရင် ၁ နာရီခွဲ ၂ နာရီကြာတယ်။ မယုံမရှိပါနဲ့။ အားလုံးကို ထောင့်စေ့အောင် ဖားပြီးပြီ ဆိုရင် လက်ဆောင်ကိုလည်း ထောင့်စေ့အောင်ကို ပေးတတ်တာ။ အမြောက်တပ်လည်း အခုတော့ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တော်တော်နိမ့်ကျ နေပြီ။ သူကို့ဖားတဲ့သူတွေ နေရာပေးတော့ ပညာသည်လိုင်းမှာ များသောအားဖြင့် ပညာရပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ တော်တဲ့သူက သိပ်ဖားလေ့ မရှိဘူး။ သူ့ကိုဖားတဲ့သူ တော်တော်များများက အမြောက်နဲ့ ပါတ်သတ်ရင် ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်း မသိတဲ့လူတွေ။ စစ်ဆင်ရေးမှာ အဲလူတွေက ဘာမှ သုံးမရဘူး။ အခု မြန်မာပြည်မှာ တိုက်ပွဲ တစ်ခုခု ကြီးကြီးမားမား ဖြစ်ကြည့်။ အယင်တုန်းကလိုတော့ အမြောက်တပ်ဖွဲ့ စွမ်းရည်တွေ သွားမယုံလိုက်နဲ့။ ကိုယ့်ခေါင်းပေါ် ပြန်ကျလာမယ်။ ဘာမှ အရည်အသွေး မရှိတော့ဘူး။ ပေါ်ပင်တွေ လုပ်နေတာ။ ဖားတဲ့သူတွေ နေရာပေးနေတာ။ အခုလက်ရှိ အမြောက်တပ်ဖွဲ့အကြောင်း တကယ် အတွင်းကျကျသိရင် စာဖတ်သူတွေ အော့နှလုံးနာ သွားလိမ့်မယ်။ သူ့အကြောင်းဆက်ရေးနေရင် တစ်နေ့လုံးဘာအလုပ်မှ လုပ်ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ သိပ်များလွန်းလို့။ ဒီလိုလူမျိုးတွေ တပ်မတော်မှာ မထားသင့်တော့ပါဘူး။ သူ့လက်အောက်က ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တော်တဲ့ ဒုညွှန်မှုး ဗိုလ်မှုးကြီး အေးသော် ကိုလည်း ကန်ထုတ်လိုက် တယ်။ တကယ်တော်တဲ့ ဗိုလ်မှုးကြီး သက်ဦးလိုလူကိုလည်း ကောင်းကောင်းနှိပ်ကွက်ထားတယ်။ ကျွန်တော်က အမြောက်တပ်က မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် သူငယ်ချင်းတွေ ရင်ဖွင့်လွန်းတာရယ် ၊ ကျွန်တော့် ဆရာသမားနဲ့ နေစဉ် သူ့အကြောင်း လေ့လာခွင့် ရတာရယ်ကြောင့် တော်တော်လေးတော့ သိနေတယ်။ ဒါတောင် မရေးသင့်တာတွေ မရေးဘဲ တခြားသောသူတွေပါနစ်နာမှာစိုးလို့ ချန်ထားခဲ့ တာပါ။ တပ်မတော်မှာ ဗိုလ်ချုပ်တင်ငွေလို လူမျိုး ဖြုတ်တယ် ဆိုရင် ၊ သူ့လိုလူမျိုး ထောင်ပါ ချသင့်တယ်။ သူ့ကြောင့် နစ်နာခဲ့ရတဲ့ မိသားစု ဘ၀တွေ အများကြီး။ နစ်နာခဲ့ရတဲ့ အရည်အချင်းရှိ စစ်သည် အရာရှိတွေ များနေပါပြီ။ ဒီလိုလူမျိုးကို လက်အောက်က အသေးစိတ် ရေးပြီး ဖော်ထုတ်သင့်ပါပြီ။ အခုလို အပေါ်ယံလေး ရေးပြီး ဘာမှ ထိထိမိမိ မရှိတဲ့ စာမျိုးနဲ့တော့ မလုံလောက်ပါဘူးလို့ အကြံပေး လိုက်ချင်ပါတယ်။
20့10့2011 ရက်မှာသူ့သမီးအငယ် weeding ရန်ကုန် ဆီဒိုးနား မှာလုပ်ရန် စိုင်းပြင်းနေတယ်။ အမြောက်တပ်တွေ အားလုံး မရှိတဲ့အထဲကတနင့်တပိုး လက်ဖွဲ့ ပေးရဖို့စိတ်ညစ်နေကြပြီ။ လက်ဖွဲ့ ကို checklist နဲ့စစ်မှာလေ။နည်းသွားရင်၊မပေးမိရင် သေမဲ့သာ ပြင်ပေတော့။
ကျွန်တော်ကတော့အမြောက်တပ်ကအရာရှိတစ်ဦးပါ ကျွန်တ်ာတို့ ညွှန်မှူးတော့ ဒီသတင်းကို ဖတ်ပြီးပင်စင်ယူခါနီး ဖင်ကျိန်းနေလေရဲ့။ ကျွန်တော်တို့ ရင်ဖွင့်ချင်တာတွေနဲ့ ထပ်တူကျလို့ အားရလိုက်တာဗျာ သူ့အချိုးတိုင်းလာမယ့်သူ့တပည့်တွေပဲ အမြောက်တပ်မှာ ကြီးပွားကြ မှာပါပဲ သူ့အကြောင်း မကြာခဏတင်ပေးပါဦး အဲဒါမှသူ့ရဲ့ ကြောင်သူတော်ကြွက်သူခိုးဇာတ်လမ်းတွေ ဘူးပေါ်သလိုပေါ်မှာ ဒီသတင်းကထိရောက်မှုရှိပါတယ်။ ခုလဲပင်စင်ယူခါနီ ခါတော်မီ သူ့သမီးက မင်္ဂလာဆောင်ဦးမယ်ဆိုပဲ အမြောက်တပ်က တပ်မှူးတွေတော့ ခေါင်းကျိန်းနေလေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကြိုးစားမှုကြောင့် ရလာတဲ့ရာထူးတွေကိုလဲ သူပေးထားတဲ့ရာထူးတွေတဲ့ အံ့လဲအံ့လောက်ပါရဲ့ဗျာ
အမြောက်တပ်ကအကြောင်းတွေပြောချင်လွန်းလို့ပါ။အခု ခင်ဗျားတို့ ပြောနေကြတဲ့ မြ၀ါးသမီးအငယ်မ အောက်တိုဘာ(၂၀) မှာ မင်္ဂလာဆောင်မယ် ပြောပါတယ်။အကြီးမဆောင်တုန်းကလည်း တပ်ရင်းတစ်ရင်း (၂) သိန်း၊ တပ်မတစ်ခု (၅) သိန်း ကနေ (၁၀) သိန်းထိ ပေးခဲ့ရပါတယ်။ အခု အငယ်မကိုလည်း တပ်ရင်းမှူး (၂) သိန်း ၊ ဗျူဟာမှူး (၃) သိန်း ၊ တပ်မတစ်ခု ကို (၁၀) သိန်းနှုန်း အပြိုင်ကြေး ခေါ် နေပါတယ်။ မြ၀ါး(မြ၀င်း) က ပင်စင်သွားတော့မှာမို့ လက်လွှဲယူမဲ့ တပ်မမှူး တွေက လည်း သူရ နှိုးနှိုး၊ ကိုယ်ရ နှိုးနှိုး နဲ့ပဲ ဖိကောက် နေကြပါတယ်။ ဘောနပ်ကြီး ၊ သထုံ ၊ အောင်ပန်း၊ အုတ်တွင်း တပ်မ တွေက တပ်ရင်းမှူး ကတော်တွေက မလာမနေရဆိုဘဲ။ မိတ္တီလာက တပည့်ကြီး ဇော်ဝင်း နဲ့ မရှမ်းမ ကတော့ အစအဆုံးအကုန်ခံ ကြမယ်ဆိုဘဲ ။
အကြီးမတုန်းကလည်း ပွဲတက်ဝတ်ဆုံချိတ်တွေကို တစ်ယောက် တစ်သိန်းနီးပါးဝယ်ပြီး ပွဲတက်ခဲ့ရတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ Silk Style က ပိုးနဲ့ပွဲတက်ကြရမှာတဲ့။ တစုံ (၂) သိန်း နီးပါးပေးရပါတယ်။
တပ်ရင်းမှူး ကတော်တွေက တစ်လတစ်ခါ လူသစ် (၂)သိန်း ၊(၃) သိန်း နဲ့ စုရ ၊အကောက်အခံ ကများနေမို့လို့ ဒုက္ခရောက်နေကြရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့မြ၀ါး ကတော့ မျက်ဖြူစိုက်လေ ဆရာကြိုက်လေပါပဲ ။ မြ၀ါးကို ဒီအတိုင်းပဲကြည့်နေကြတော့မှာလားဗျာ ။ မစခ (၉၀၄) က ဗိုလ်မှူးချုပ်သက်လွင် ကလည်း ခွဲမှူးတုန်းက မိုလေ၀သတိုင်းထွာရေး ၊ တပ်ရင်းမှူးကြတော့ ရန်ကုန် (၅၀၃)မှာ မြေကို အ၀ိစိ ထိတူးရောင်းပြီး ဖားခဲ့လို့အခု အမြောက်တစ်ချက်မှမပစ်ဖူးဘဲ တပ်မမှူး ဖြစ်နေပါပြီ ။ ကျွန်တော် သူများမကောင်းပြော တာ မဟုတ်ပါဘူး ၊ အမြောက်က တစ်ကယ်တော် တဲ့ ဒုညွှန်မှူးလိုလူမျိုးနဲ့ ယှဉ်ကြည့်ပါ၊ ဖွဲ့နဲ့ ဇကွဲပါ ။အခုလည်း ဗိုလ်မှူးချုပ်သက်လွင် ကတပ်တွေကအခွန်တွေကောက် ၊တပ်စစ် လာတော့ အပုံလိုက်ပေးနဲ့ တစ်နေ့ နှစ်ခါဖုန်းဆက် ဖားပြီး ညွှန်ကြားရေးမှူး (ဓါးပြခေါင်းဆောင်) လက်သစ်ဖြစ်မယ့်သူဆိုပြီ ကြုံးဝါးနေပါတယ် ။ ပြီးတော့ သူက မင်္ဂလာဆောင်အတွက် လက်အောက်ခံ တပ်ရင်းများကို (၁၀) ရက်နေ့ထက်နောက်မကြဘဲ
ဆက်ကြေး တစ်ရင်းတစ်ရင်းကို (၃) သိန်းကောက်ပြီး ယစ်ပူဇော်ဖို့ လုပ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့် အထက်အောက်မှာ ရှိကြ တဲ့ လူသူတော် ကောင်း ၊ နတ်သူတော် ကောင်းများ အမြောက်တပ်ကြီးကို စောင့်ရှောက်ကြပါရန် အကြောင်းကြားပေးကြပါဦးလို့။
အခုဒီသတင်းတွေကိုဖတ်ပြီး သူ့သမီးမင်္ဂလာဆောင် မှာ ရွှေနဲ့ငွေသား လက်မဖွဲ့ရဆိုပဲ အင်း တိုက်တို့ ကားတို့ပဲလက်ခံတော့မယ်တူပါရဲ့ လက်မဖွဲ့ရဆိုပြီး ဘာလို့ အပြတ်မပြောတာလဲဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ရင် တို့ဗိုလ်ချုပ်ကိုမေးလိုက်ချင်ရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကလိထိုး တစ်ဆယ်ဖိုး လောက်သာရီချင်တော့တယ်ဗျာ
မင်္ဂလာနှစ်သစ်မှာ ချစ်သော အမြောက်တပ်သားအပေါင်း မင်္ဂလာရှိ ကြပါစေ။ မြ၀ါး ကတော့ ၀ါးပြီးရင်း ၀ါးဆိုသလို နှစ်သစ်မှာစားပြီးဝါးပြီး သိမ်းကြုံး ယူဦးမှာပါ။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့တွေ မင်္ဂလာရှိဖို့က မြ၀ါးမရှိမှဖြစ်မှာပါ။ ကျွန်တော် ကတော့NewYear ညမှာဆုတောင်း ချင်တာကတော့ မြ၀ါးကြီးမြန်မြန်ပြုတ်ဖို့ပါဘဲ။ သူကတော့ နောက် တစ်နှစ်တောင် နေချင်တယ်ဆိုဘဲ။နှစ်သစ်မှာ လူသစ်စိတ်သစ်နဲ့ စိတ်သဘောထား မှန်ကန်တဲ့ director အသစ်တစ်ယောက်ရပါစေလို့ ဆုတာင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Always Gunners Group
ဗိုလ်ချုပ်မြ၀င်း(ခ)ဗိုလ်မြ၀ါးသည် ၉့ ၁့ ၁၀၁၂ နေ့မှစ၍ အမြောက် တပ်ဖွဲ့တွင် သေဆုံးသွားခဲ့ ပြီဖြစ်သည်။ သင်သည် တပ်ဖွဲ့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် ကာလ အတွင်း အထက်လူကြီးကို ဖော်လံဖား ၊ တန်းတူကို ကတုံးကတိုက် ချောက်တွန်း ၊ အောက်လူကို လှေကားထစ်လိုနင်းကာ ညွှန်ကြားရေးမှူး ရာထူးအထိ မတန်တရာ တက်လှမ်းခဲ့ သူဖြစ်သည်။ သင့်လက်ထက်တွင် ငါတို့အမြောက်တပ်ဖွဲ့ သည် စိတ်ဓါတ် မှစ၍ အဖက်ဖက် တွင် ယို့ယွင်း ပျက်ဆီးခဲ့ရသည်မှာ ဆယ်စုနှစ် တစ်စုကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။သင်သည် သင့်ကိုနေရာပေးသူ ၊ မြေတောင်မြှောက်ပေးခဲ့သူများ ဖြစ်သည့် ဗိုလ်ချုပ်ကြည်ဝင်း ၊ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွှန့် အစရှိသည့် လူကြီးများက်ု လည်း ရိုင်းပြစွာဆက်ဆံ ခဲ့သည်။ ဗိုလ်မှူးကြီးမြင့်ရှိန် ကဲ့သို့သော (စီနီယာ)များကို လည်း (ဟန်းကတိုင်း) တောထဲပို့ပြီး သက်ပြည့်အထိနေစေကာ ပင်စင်ယူ စေခဲ့သည်။စီနီယာများကို တောထဲတွင် ထားပြီး မနေ့တစ်နေ့ကမှ ဗိုလ်မှူးဖြစ်သောသူတွေကို(ရန်ကုန်၊ နေပြည်တော် ၊ မိတ္တီလာ ၊သိမ်ဇရပ်) မြို့ကြီးများပေါ် ခေါ်ထားခဲ့သည်။ ထိုခေတ္တ တပ်ရင်းမှူး များထံမှ တလ (၅) သ်ိန်း မှ (၁၀) သိန်းထိ ဆက်ကြေးကောက်ယူကာ ကိုယ်ပိုင်တိုက် (၁၆)လုံးထိ ဆောင်ယူ ခဲ့သည်။ အမြောက်တပ်ဖွဲ့မှ အငြိမ်းစားယူ (အပြင်ရောက် ရှိနေသော) အရာရှိကြီး များကိုလည်း သင့်လက်ထက်တွင် မည့်သည့်တပ်ကိုမျှ အ၀င်မခံ၊ တပ်ဖွဲ့ နေ့လည်း မဖိတ်ဘဲ ပြစ်ပယ်ခဲ့ရာ ငါတို့မှာ သီးခြား ပြင်ပ တွင် တပ်ဖွဲ့နေ့ကျင်းပပြီး တွေ့ဆုံခဲ့ကြရသည်။ ယခု သင်လည်းဒီဘ၀ကို ရောက်ရှိပြီ ဖြစ်လို့ ဘာမျက်နာနဲ့ငါတို့ တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေ ကြားထဲလာ မလဲ ၊ ယခု ဘာမျက်နှာ နဲ့အရှက်မရှိ အမြောက်တပ်ဖွဲ့ တွေကြားထဲ သွားမလဲ သိချင်လှသည်။ Once A Gunner Always A Gunner ထဲတွင်သင်မပါ။သင်သည် alwaysadestroyer ဖြစ်သည့်အတွက် အမြောက်တပ်ဖွဲ့မှ သင်အား အပြီးတိုင်ထုတ်ပယ်လိုက်သည်။ သင်လိုရာသို့သွားနိုင်ပြီ မောင်မြ၀င်း။
Always gunners အဖွဲ့
နိုင်ငံတော်ရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာမှာ ခက်မ(၃)ဖြာရှိတယ်။
(၁) ဥပဒေပြုရေးအာဏာ (Legislative Power)
(၂) အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ (Executive Power)
(၃) တရားစီရင်ရေးအာဏာတို့ဖြစ်တယ်။ (Judicial Power)
(၁) ဥပဒေပြုရေးအာဏာ (The Legislative Power)
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများမှာ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေက ဥပဒေတွေကို လွှတ်တော်များမှာ တင်ပြဆွေးနွေးပြီး အများစု သဘောတူညီချက်နဲ့ အတည်ပြုကြတယ်။ “ဥပဒေတို့သည် ပြည်သူတို့၏ သဘောဆန္ဒတွင် အခြေခံသည်” ဆိုတဲ့ မူအရဖြစ်တယ်။ ဒီမိုကရေစီ မဟုတ်တဲ့ တိုင်းပြည်တွေမှာ ဥပဒေ၊ အမိန့်တွေနဲ့ အုပ်ချုပ်ကြပေမဲ့ ဒီဥပဒေ၊ အမိန့်တွေဟာ ရှင်ဘုရင်တွေ၊ အာဏာရှင်တွေ၊ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ၊ ဘာသာရေးအကြီးအကဲတွေရဲ့ အလိုဆန္ဒ၊ စိတ်ကူးပေါက်ရာ တဒင်္ဂစိတ်ခံစားချက် စိတ်ကူးတွေအတိုင်း ပြုလုပ်ပြဌာန်းခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒ၊ သဘောထား မပါခဲ့ပါဘူး။ ဥပဒေပြုလွှတ်တော် ဆိုတာမျိုးတွေ တည်ထောင်ထားပေမဲ့၊ ဥပဒေပြုအမတ်တွေ၊ ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ ပြည်သူထဲက ပြည်သူ့ကိုယ်စား၊ ပြည်သူကရွေးချယ် လိုက်တဲ့၊ ပြည်သူ့အတွက် အမတ်တွေ၊ ကိုယ်စားလှယ်တွေမဟုတ်ဘဲ ဟန်ပြအမတ်၊ ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ခန့်အပ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း ကိုယ်စားပြုသူတွေရဲ့ လွှတ်တော်တွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီလွှတ်တော်မျိုးတွေက ပြဠာန်းလိုက်တဲ့ ဥပဒေတွေဟာလည်း “ဘယ်ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒ၊ ပြည်သူ့အသံမှ မဟုတ်နိုင်ပါဘူး” ။ From the people, by the people, of the peopel, for the people.
“ပြည်သူ့အသံ၊ လွှတ်တော်အသံ” ဖြစ်ဖို့အတွက် ဥပဒေပြုလွှတ်တော်မှာ ပြည်သူတွေရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အစစ်အမှန်များ ပါဝင်ကြရပါမယ်။ ပြည်သူများလိုလားတဲ့ ဥပဒေများကို ရေးဆွဲခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း ပြုလုပ်ကြရပါမယ်။ ဥပဒေတွေ အတည်မဖြစ်မီ ကာလမှာလည်း၊ အများပြည်သူများ သိရှိခွင့်၊ အများပြည်သူများထဲက စိတ်ဝင်စားသူများ ပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်၊ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များရဲ့ အယူအဆ၊ သဘောထား၊ ထောက်ပြဝေဖန်ခွင့်နဲ့ တင်ပြဆွေးနွေးခွင့်များ ပေးရပါမယ်။ ဒါမှသာ မိမိတို့ပါဝင် ဆွေးနွေး၊ ထောက်ပြဝေဖန်ထားတဲ့ ဥပဒေကို ပြဌာန်းတယ်လို့ ပြည်သူများ လက်ခံရှုမြင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဤပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် တစ်ရပ်ကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့ အမျိုးသားလွှတ် တော် နှစ်ရပ်ပေါင်း၍ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားပြီး ဥပဒေပြုရေးအာဏာကိုကျင့်သုံးပါတယ်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် (၃၃၀)နဲ့ တပ်ခန့်ကိုယ်စားလှယ် (၁၁၀) စုစုပေါင်း (၄၄၀) ရှိတယ်။ အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ အမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ် (၁၆၈)နဲ့ တပ်ခန့်ကိုယ်စားလှယ် (၅၆) စုစုပေါင်း (၂၂၄) ရှိတယ်။ ဒါ ကြောင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ အရပ်သားအမတ် (၄၉၈)ဦးနဲ့ တပ်ခန့်ကိုယ်စားလှယ် (၁၆၆)ဦး ပါဝင်တယ်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟာ သူရဦးရွှေမန်းဖြစ်တယ်။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟာ ဦးခင်အောင်မြင့်ဖြစ်တယ်။ ဒုတိယအလှည့်ကျ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကဟာ သူရဦးရွှေမန်းဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က ဥပဒေများကို ပြဌာန်းပါတယ်။ ပြဌာန်းတဲ့ ဥပဒေတွေဟာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ ညီညွတ်မှု ရှိ/မရှိကို နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံးကစီစစ်နိုင်ပါတယ။ (ပုဒ်မ-၄၆၊ ၃၂၂) ပြည်ထောင်စုလွှတ် တော်ကလည်း နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံးဥက္ကဋ္ဌနဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေကို စွပ်စွဲပြစ်တင်ပြီး ရာထူးမှရပ်စဲနိုင်တယ်။ (ပုဒ်မ-၃၀၂၊ ၃၃၄)
(၂) အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ ။ (The Executive Power)
နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးအကြီးအကဲဟာ နိုင်ငံတော်သမ္မတဖြစ်တယ်။ ဦးသိန်းစိန်ဟာ သမ္မတဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်းနဲ့ ဦးဥာဏ်ထွန်းတို့ဟာ နိုင်ငံတော် ဒုတိယသမ္မတများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ သမ္မတကို သမ္မတရွေးချယ်တင်မြောက် ရေးအဖွဲ့နဲ့ ရွေးတယ်။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အစုအဖွဲ့ကတစ်ဦး၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစုအဖွဲ့က တစ်ဦး၊ လွှတ်တော်နှစ်ရပ်မှာ တပ်ခန့်ကိုယ်စားလှယ် အစုအဖွဲ့ကတစ်ဦး၊ ဒုတိယသမ္မတ(၃)ဦး ရွေးကြရတယ်။ သူတို့ထဲက တစ်ဦးကို သမ္မတအဖြစ် သမ္မတရွေးချယ်တင်မြောက်ရေးအဖွဲ့က ဆန္ဒမဲပေးပြီး ရွေးချယ်တယ်။
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကို အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ ဖွဲ့စည်းတယ်။
(က) နိုင်ငံတော်သမ္မတ ၊ (ခ) ဒုတိယသမ္မတများ၊ (ဂ) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ (ဃ) ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်
(က) ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး၊ နယ်စပ်ဒေသရေးရာဝန်ကြီးနဲ့ ဒုတိယ၀န်ကြီးများမှအပ ကျန်ဝန်ကြီး၊ ဒုတိယ ၀န်ကြီးများကို သမ္မတက အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်း၊ ခန့်အပ်ခြင်း တာဝန်ပေးခြင်း ပြုနိုင်တယ်။
(ခ) (ပြည်၊ ကာ၊ နယ်) ၀န်ကြီး၊ ဒုဝန်ကြီးများကို တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထံမှ အမည်စာရင်း ရယူ၍ခန့်ထားရမယ်။
(ဂ) အခြားဌာနများမှာ တပ်မတော်သားများကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်လိုလျှင် (တပ်/ချုပ်) နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင် ရွက်ရမယ်။
ယနေ့အထိ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့မှာ ၀န်ကြီးနဲ့ဒုဝန်ကြီး (၉၇)ပါး ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
အုပ်ချုပ်ရေးမှာ “သက်ဦးဆံပိုင်မင်းတို့ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး၊ စစ်အာဏာရှင်၊ တစ်ပါတီအာဏာရှင်တို့ရဲ့ တစ်ချက်လွတ်အာဏာ နဲ့ အုပ်ချုပ်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး” စနစ်တွေဟာ အုပ်ချုပ်ခံပြည်သူများအတွက် အလွန်ခါးသီး၊ ဆိုးဝါးလှပါတယ်။ ကိုယ်ချင်းစာနာမှု ကင်းမဲ့သလို၊ တရားမျှတမှုလဲ ကင်းမဲ့ပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်တွေလက်ထက်မှာ ဥပဒေပြုရေးကိုလဲ သူတို့ပဲ အမိန့်တွေ၊ ဥပဒေ တွေနဲ့ ပြုခဲ့ကြတယ်။ ဥပဒေကို အကောင်အထည်ဖော်တဲ့ အုပ်ချုပ်သူ၊ အရေးယူသူဟာလဲ သူတို့ပဲဖြစ်တယ်။ ဥပဒေမှာ မပါရှိတဲ့၊ ဥပဒေနဲ့ မညီတဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကို ဥပဒေမဲ့စွာ အကောင်အထည်ဖေါ်၊ အရေးယူ၊ အပြစ်ပေး၊ ပြစ်ဒဏ်ခတ်၊ နှိပ်စက်၊ ဖမ်းဆီး၊ သတ်ဖြတ်တာတွေ ရှိလာခဲ့တယ်။ ပြည်သူတွေမှာ “ဥပဒေ” ဆိုရင်ကို “သူတို့လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်ကြတော့မှာပဲ” လို့ အထင်ရောက် ပြီး ကြောက်လာခဲ့ကြရတာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာခဲ့ပြီကော။ ကမ္ဘာပေါ်က ယဉ်ကျေးတဲ့၊ ဥပဒေစိုးမိုးတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ တိုင်းပြည် အုပ်ချုပ်တဲ့အလုပ်ကို သတ်မှတ်ပြဠာန်းထားတဲ့ ဥပဒေများနဲ့ အညီသာ အရေးယူ၊ အတည်ပြု၊ ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ရကြောင်း လက်ခံ၊ ခံယူ ထားကြပါတယ်။ အုပ်ချုပ်သူအကြီးအကဲ၊ သမ္မတ၊ ၀န်ကြီးချုပ်၊ ၀န်ကြီးများဟာလည်း တရားဥပဒေကို ကျော်လွန်ပြီး လုပ်ဆောင်ခွင့်မရှိပါ။ “ဥပဒေအထက်မှာ ဘယ်သူမှမရှိ” ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးကို လက်ခံကြရပါတယ်။ (No one is above the law) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ အထက်မှာဆိုရင် ပိုပြီးမရှိသင့်ဘူးပေါ့။
အုပ်ချုပ်သူဟာ အများပြည်သူနည်းတူ တရားဥပဒေရဲ့ လက်အောက်မှာပဲ ရှိကြရပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကို ထူထောင် မယ်၊ ကောင်းမွန်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် ကျင့်သုံးမယ်၊ ကောင်းမွန်သန့်ရှင်းတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ တကယ်ဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုရင် ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့အညီသာ အုပ်ချုပ်ရမယ်လို့ ယုံယုံကြည်ကြည် ခံယူရမယ်။ ဒီအတိုင်းလဲ ကျင့်သုံးရမယ်။ ကျင့်သုံးဖို့ အားထုတ် ရပါမယ်။ “ရေးသားပြဌာန်းထားတာက ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သစ်” ဆိုပေမဲ့ အာဏာရှင်ရဲ့လက္ခဏာ၊ အကျင့်၊ စရိုက်၊ လုပ်ပုံလုပ်နည်းကို မဖျောက်နိုင်ရင်တော့ ဘယ်ပြည်သူကမှ ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရလို့ ယုံကြည်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများမှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးတဲ့စနစ် (Rule of law) ခိုင်မာတောင့်တင်းအောင်၊ အစွမ်းကုန် ဂရုစိုက် တည် ဆောက်ကြပါတယ်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးခြင်း ကသာလျှင်၊ နိုင်ငံတော်နဲ့ နိုင်ငံသားတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ ရပိုင် ခွင့်များကို ထိန်းသိမ်း၊ ကာကွယ်၊ စောင့်ရှောက်နိုင်လို့ဖြစ်တယ်။ အကျင့်ပါနေတဲ့ တစ်ချက်လွတ်အမိန့်တွေ၊ အာဏာတွေ၊ အင် အားသုံးမှုတွေ၊ ငြိမ်အောင်၊ ၀ပ်အောင်၊ ပိအောင်၊ ပြားနေအောင်လုပ်တဲ့ အလေ့အထတွေကို အမြစ်ကလှန်ပြီး အဟုတ်ပြောင်း ရပါမယ်။ (အဟုတ်မပြောင်းရင်) ဘယ်ပြည်သူကမျှ တရားမျှတတဲ့ လုပ်ဆောင်မှုလို့ လက်မခံကြပါဘူး။
မကြာမီကာလအထိ၊ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကို ကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများဟာ ဥပဒေပြုရေး အာဏာကိုလည်း ကိုင် တွယ်ခဲ့ကြတယ်။ တရားစီရင်ရေး ဆောင်ရွက်တဲ့ တရားရေးမဏ္ဍိုင်နဲ့၊ တရားသူကြီးများရဲ့ ခေါင်းပေါ်မှာလဲ တက်ထိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်၊ ဘယ်လိုပြစ်ဒဏ်ချ စတဲ့ တရားရုံး သက်သေခံချက်တွေမှာ မပါတဲ့၊ ဥပဒေပြဌာန်းချက်မှာမပါတဲ့ စီရင်ချက်တွေ ကို ချမှတ်ခိုင်းခဲ့ကြတယ်။ သမိုင်းတစ်ခုပါ။ ငြင်းကွယ်လို့ မရပါဘူး။ သူတို့ခိုင်းသမျှကို ပျော်ပျော်ကြီး လိုက်လုပ်ပြီး၊ အောက်လက်ကိုလည်း လိုက်လုပ်ဖို့ ညွှန်ကြားခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်း ရှိခဲ့တယ်။ သမိုင်းတစ်ခုပါ။ (မကြာမီကာလ) ဆိုတာနဲ့ (ယနေ့စနစ်သစ်အစိုးရ) ဆိုတဲ့ (ကာလ) လေးဟာ ဘာမှ မကြာသေးပါဘူး။ အုပ်ချုပ်သူရော၊ တရားသူကြီးရော မပြောင်းလဲကြသေးပါဘူး။ စနစ်သာ ပြောင်းလဲသွားပြီလို့ ပြောနေကြတာပါ။
(၃) တရားစီရင်ရေးအာဏာ ။ (The Judicial Power)
တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍမှာ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကို ထည်ထောင်ထားတယ်။ ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် က ဦးထွန်းထွန်းဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် တရားသူကြီးများက ဦးသာဌေး၊ ဦးစိုးညွန့်၊ ဦးမြသိမ်း၊ ဦးမြင့် အောင်၊ ဦးအောင်ဇော်သိန်းနဲ့ ဦးမြင့်ဟန်တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ဟာ (နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေ ခံခုံရုံးနဲ့ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးများရဲ့ အာဏာကို မထိခိုက်စေဘဲ) နိုင်ငံတော်ရဲ့ အမြင့်ဆုံးတရားရုံးဖြစ်တယ်။
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ဟာ (ရှေ့တော်သွင်း၊ အာဏာပေး၊ တားမြစ်စေ၊ အာဏာပိုင်မေး၊ အမှုခေါ်) စာချွန် တော်များ ထုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ (ပုဒ်မ-၂၉၆)
တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်မှာ တရားလွှတ်တော် (၁၄)ရပ်ရှိတယ်။ တရားသူကြီးချုပ် (၁၄)ဦးနဲ့ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်တရားသူကြီး (၃၈)ဦး ရှိတယ်။ ဥပဒေချုပ် (၁၄)ဦးရှိတယ်။
ခရိုင်နဲ့ မြို့နယ်များမှာ တရားရုံးများ ရှိတယ်။
နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံးဆိုတာရှိတယ်။ အဖွဲ့ဝင်(၉)ဦးရှိတယ်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတက (၃)ဦး၊ ပြည် သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက(၃)ဦး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက(၃)ဦး အမည်စာရင်းတင်သွင်းပြီး၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အတည်ပြုချက်နဲ့ ခန့်ထားတယ်။ ပထမအကြိမ် ခန့်ထားခဲ့တဲ့ ခုံရုံးအဖွဲ့ဝင်များက နှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယအကြိမ် (၂၅-၂-၂၀၁၃) နေ့က ပုဂ္ဂိုလ်(၉)ဦး ထပ်မံခန့်ထားခဲ့ပါတယ်။
တပ်မတော်သားများအတွက် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးများ ဖွဲ့စည်းထူထောင်ထားတယ်။ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ တရားစီရင် ရေးမှာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့ အဆုံးအဖြတ်ဟာ အပြီးအပြတ်ဖြစ်တယ်။ (ပုဒ်မ-၃၄၃)
တရားစီရင်ရေးမှာ တရားသူကြီးများဟာ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေး အာဏာတို့နဲ့ သီးခြားလွတ်လပ်စွာ ရပ်တည်နိုင်ရန် အရေးကြီးတယ်။ တရားသူကြီးများဟာ မိမိရဲ့လုပ်ငန်း၊ မိမိရဲ့အတတ်ပညာကို စနစ်တကျ လေ့လာဆည်းပူး တတ်မြောက်၊ ကျွမ်းကျင်သူများ ဖြစ်ရမယ်။ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာသိက္ခာသုံးရပ် ပြည့်စုံရမယ်။ (ချစ်၊ မုန်း၊ ကြောက်၊ တုံး) အဂတိတရားလေးပါး ကင်းရမယ်။ သမာ သမတ်ကျတဲ့စိတ်၊ သူတစ်ပါးအလွှမ်းမိုး မခံလိုတဲ့စိတ်၊ ရဲရင့်၊ ပြတ်သားတဲ့စိတ်ရှိကြရမယ်။ တရားသူကြီးများဟာ ဥပဒေရဲ့ မျက်နှာမှအပ အခြားမည်သူရဲ့ မျက်နှာမှမကြည့်ဘဲ တည့်မတ်၊ မှန်ကန်စွာ တရားစီရင်ကြရမယ်။ အာဏာ၊ အင်အား တစ်စုံတစ်ရာရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာရောက်နေရင် တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်အပေါ် ပြည်သူရဲ့ အယုံအကြည် ကင်းမဲ့သွားပါတယ်။ သမိုင်းမှာ တွေ့ခဲ့ မြင်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ တရားသူကြီးများဟာ ပညာရှိ၊ သူတော်ကောင်း၊ ဂုဏ်အသရေရှိသူ၊ ဂုဏ်သိက္ခာမြင့်မားသူများ ဖြစ်တယ်လို့ မိမိကိုယ်ကိုယ်၊ ယုံယုံကြည်ကြည် ခံယူနိုင်တဲ့ အနေအထားမျိုး ရှိရပါမယ်။ အာဏာ၊ သြဇာရှိသူတွေရဲ့ ခိုင်းဖတ်၊ ခိုင်းတာမလုပ်ရင်၊ (ပြုတ်၊ ပြောင်း၊ ပြေး) ဖြစ်သွားမှာကို ကြောက်နေရတဲ့ဘ၀က လွတ်မြောက်ရပါမယ်။ အစိုးရ၊ အာဏာပိုင်၊ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်၊ အကြီး အကဲ၊ ၀န်ကြီး စတဲ့ သူတွေပင်ဖြစ်သော်လည်း တရားရုံးကို ရောက်ရှိလာပြီး၊ ဥပဒေရဲ့ အဆုံးအဖြတ်ကို ခံယူရမယ်ဆိုရင်၊ တရား သူကြီးများဟာ ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ တရားရုံးကျင့်စဉ်များအတိုင်း တည်တည်တံ့တံ့ ဆက်ဆံဆောင်ရွက်နိုင်ကြမှသာ ဘယ်ပြည်သူမဆို တရားဥပဒေအရာမှာ တန်းတူညီမျှ ဖြစ်တယ်လို့ ပြည်သူများက ယုံကြည်ကြမှာပါ။ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ ဥပဒေမဲ့ ပြု လုပ်မှု၊ မတရားမှုတွေကို ဘယ်သူမှ အရေးမယူရဲ၊ တရားမစွဲရဲရင်ဖြစ်စေ၊ ငါတို့ ဘာလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့၊ တရားစွဲဆိုမှုမပြုလုပ်ရဘူး လို့၊ လုပ်ထားခဲ့ရင်ဖြစ်စေ၊ ပြည်သူတွေဟာ တရားစီရင်ရေးကို မယုံကြည်၊ မကိုးစားကြတော့ပါဘူး။
ဒါဟာ အချုပ်အခြာအာဏာ (၃)ရပ် အကြောင်း အကျဉ်းချုပ်ပါ။
ကိုဖြူ ။ ။ (ကာချုပ်)ကို ဘယ်သူဖြုတ်နိုင်သလဲဆရာ။
ယူတီကေ ။ ။ (ခြေဥ)မှာ မပါဘူးဗျ ။ အဲ . . . (ကာချုပ်) ကတော့ အာဏာ (၃)ရပ်ကို သိမ်းယူနိုင်တယ်တဲ့။
(ပုဒ်မ-၄၀(ဂ)၊ ၄၁၈၊ ၄၁၉)
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 2/26/2014 1 အကြံပြုခြင်း
အမေ၀ိုင်းက အောက်က ချုပ်ကိုင်မှုကိုပဲ နှစ်သက်
ဖွတ်ပါတီကအတော်ဆုံးဆိုတဲ့ ၅ ယောက်လောက်ဘဲဆွဲထုတ်ပြစမ်းပါအတုယူချင်လို့
NLDမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလွဲရင် ကျန်တဲ့ကောင်တွေ တစ်ကောင်မှသောက်သုံးမကျဘူး၊ ၂၀၁၅မှာလည်း ကျွန်တော် ဒီ/ရှုပ် ပါတီကဦးမဲပါ၊ ကြံ့ဖွံ့က ဘူးလက်လှဆွေနဲ့ ပြိုင်ပါတယ်ဆိုပြီး ပုံကိုပြပြီးပြိုင်ပါ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံဗီနိုင်းချိတ်ပြီးပြိုင်တာသတ်္တိမရှိလို့ဘဲ
သမ္မတဦးသိန်းစိန်တက်လာပြီးတဲ့နောက်ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အပြင်းအထန်ကြိုးစားခဲ့ပြီး ပြည် တွင်းသွေးထွက်သံယိုမှုတွေကို အများကြီးလျှော့ချ နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီနောက်ပိုင်းအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုတွေ ကနေ တိုင်းရင်းသားတွေဘက်က ဖက်ဒရယ်ကိုပုံဖော်ဖို့နဲ့ သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးပိုင်းတွေကို တောင်းဆိုလာတယ်။ သူတို့ဘက်က တောင်းဆိုမှုတွေအပေါ် ဗိုလ်မှူးကြီး ဘယ်လို သုံးသပ်ပါသလဲ။
ဆေးမတိုးတော့တဲ့ တီဘီရောဂါဆိုတာရှိတယ်။ တီဘီရောဂါဆိုတာ ဆေးမှန်မှန်သောက်မှ ပျောက်မှာ။ ကမ်္ဘာပေါ်မှာ ဒီရောဂါ အရမ်းဆိုးတယ်။ အဲဒီတော့ ဒါလုပ်ပေးမယ်။ ဒါလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် လုပ်လာတာ။ ဒီထိရောက်လာပြီ။ ဒါလည်း လာဘ်က မပြည့်နိုင်သေးဘူး။ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ အစည်းတွေက ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ ငြိမ်းချမ်း ရေး ဆိုတာအကုန်လိုက်လျောပြီး နိုင်ငံတော်ရဲ့ အချုပ် အခြာအာဏာပါ ထိပါးလာနိုင်တာမျိုးဆိုရင် ဘယ်လို လိုက်လျောလို့ရမလဲ။ ကျွန်တော် ထင်တယ်။ ငြိမ်းချမ်း ရေးဆိုတာ ခြံစည်းရိုးနာနာခတ်မှရမှာဗျ။ တစ်ယောက် နဲ့ ခင်မင်မှု တာရှည်ချင်တယ်ဆိုရင်ခြံစည်းရိုးနာနာ ခတ်ရမယ်။ ကိုယ့်အိမ်အမြဲလာတဲ့ မိတ်ဆွေနဲ့ အမြဲ ခင်ချင်ရင်အိမ်ကမီးခံ သေတ္တာကို သော့ခတ်ထားရမှာ ပေါ့။ ခုတိုင်းရင်းသားတွေ၊ တိုင်းရင်းသားတွေလို့ ပြော နေကြတယ်။ ဗမာလည်းတိုင်းရင်းသားပဲလေ။ ဗမာက ရော ပြောခွင့်မရှိဘူးလား။ ကျွန်တော်ဗုဒ်္ဓဘာသာ ဗမာ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပြောမယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ပျက်စီးစေလိုတဲ့ ဆန္ဒဘာမှမရှိဘူး။ ခKIAက မိုးမောက်မှာ သာသနိက အဆောက်အအုံ တွေနဲ့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေကို ဖျက်ဆီးလိုက်တယ်။ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေဆို ခေါင်းတွေပြတ်၊ ခါးတွေပြတ်နဲ့ ခေါင်းတွေမြေခနဲ့ဒီဖိုင်တွေ ကျွန်တော့်ဆီကို ဟိုက ဒေသခံသံဃာတော်တွေ ပို့ပေးထားတယ်။ ကျွန်တော် တို့ကတော့ ပြဿနာမဖြစ်ချင်ဘူး။ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ မြန်မြန်ရလေလေ ကောင်းလေလေပဲ။
ခု ဦးအောင်မင်းတို့ဦးဆောင်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး အကောင်အထည်ဖော်မှုတွေ လုပ်နေတာပဲ။ နောက်ပြီး တော့ Power Sharing အတွက်လည်းလုပ် နေတာပဲ။ နှစ်ဖက် အပြောအရတော့ Peace Process တွေ တော်တော်အောင်မြင်နေပြီဆိုတယ်။ ဒီအပေါ်ဗိုလ်မှူး ကြီး ဘယ်လိုသုံးသပ်ပါသလဲ။
ပြောရရင် ခုဦးအောင်မင်းတို့သွားနေတဲ့ ငြိမ်းချမ်း ရေးလမ်းကြောင်းက အကုန်လိုက်လျောပေးမယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးဆိုရင် ဖြစ်ပါ့မလား။ ဒီအပေါ်ကျွန်တော် သံသယရှိတယ်။ အကုန်လုံး လိုက်လျောမယ်။ သယံ ဇာတဝေခြမ်းရေး၊ အာဏာဝေခြမ်းအသုံးချရေးဆိုတာ ပြောနေတယ်။ ဆွေးနွေးနေတယ်။ အဲဒါတွေကရနေ ပြီဗျ။ ကချင်မှာ ၁၀ပေပတ်လည်ကျင်းတစ်ကျင်းတူးရင်KIA ကို နှစ်သောင်းပေးရတယ်။ လူတစ်ယောက်လာ တူးရင် ငါးထောင်ပေးရတယ်။ ဘာဖက်ဒရယ်တွေ၊ Power Sharing တွေ ပြောနေစရာ မလိုဘူး။ ဟိုမှာ ဖက်ဒရယ် အကုန်ရနေပြီ။ သူ့ဟာသူ အုပ်ချုပ်နေပြီ လေ။ ဟိုမှာ ဖက်ဒရယ်က ရနေပြီလေဗျာ။
ခုလိုမျိုး ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်တဲ့အခါ ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်၊ ဖက်ဒရယ်တပ်မတော် ဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ အချက်လည်း ပါနေတယ်။ ဒီတော့ တိုင်းရင်းသားအားလုံး စုပေါင်းပါဝင်တဲ့ ဖက်ဒရယ် တပ်မတော်တစ်ခုဖြစ်လာဖို့အပေါ် ဗိုလ်မှူးကြီးရဲ့Per-sonal အမြင်လေးပြောပြပေးပါဦး။
ဟိုးအရင်တုန်းက ဗိုလ်မှူးချုပ် တီကလစ်တို့၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမစ်ဒွန်းတို့ စသဖြင့် ကရင်တွေ ကာ ကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လိုတာဝန်ကြီးတွေ ထမ်းဆောင်ခဲ့ တယ်။ အဲဒီချိန် မှာပKNDOက အင်းစိန်ကိုဝင်တိုက် တယ်။ ဒီတော့ ဗမာ့တပ်မတော် အနေနဲ့ တိုင်းရင်းသား တွေကိုမယုံခဲ့ဘူး။ နောက်ပိုင်းမှာ အဲဒါတွေပေါ်မူတည် ပြီး တိုင်းရင်းသားတွေကို နေရာကောင်းကောင်း၊Com-ander နေရာတွေ မပေးတော့ဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်အယ်လ် ကွန်ဖန်ဆိုလည်း ကချင်ပဲ။ သူဒီရာထူးရခဲ့တယ်။ သူလို ပုဂ်္ဂိုလ်မျိုး ဆက်တည်မြဲနေရင်တော့ ကောင်းမယ်။ ဒါပေမKIAကလည်း သူ့ကိုသတ်လိုက်သေးတယ်။ ဆိုလိုတာက ပြေးဖို့ကြံစည်ခဲ့သော်လည်းKIA က လာ သတ်တယ်။ ပြီးတော့ တိုင်းမှူးတစ်ယောက်ကိုလုပ်ကြံ ပြီးတော့ သူတို့အိမ်သူတို့မီးရှို့ပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အယ်လ်ကွန်ဖန်ပြီးတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်ဘ တက်လာတာပဲ။ နောက်ပိုင်းတိုင်းရင်းသားတွေထဲက တပ်မတော်မှာ မေဂျာလောက်နဲ့ နားသွားရရှာတယ်။ အင်မတန်တော်တဲ့ကချင်တွေ၊ ကရင်တွေလည်း ရှိပါ တယ်။ တပ်မတော်မှာ ရာထူးကြီးရမှ အပြင်ဌာန တွေမှာ နေရာကောင်း ပြန်ရတာလေ။ ဒါကိုအားလုံး သိပါတယ်။ ပြောရရင်စီပိုးလို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာ။ ခရစ် ယာန်၊ ချင်း၊ ကချင်စသဖြင့်ပေါ့ဗျာ။
တစ်ချိန်က တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေ အနေအရပ်ရပ် ကြောင့် ဒီလိုမူဝါဒတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်း လက်ရှိ ပွင့်လင်းလာတဲ့ခေတ်၊ ဒီမိုကရေစီကို ဦးတည်လျှောက် လှမ်းနေတဲ့ ခေတ်မှာ ဒါတွေကိုဘယ်လို ဖြေလျှော့မလဲ သိပါရစေ။
ခုခေတ်မှာတော့ ဒါတွေကို ဖြေလျှော့မယ်။ ဖြေ လျှော့ပြီးရင် ခုတပ်ထဲမှာ ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်းစသဖြင့် တိုင်းရင်းသားတွေ အကုန်ရှိတယ်။ အရင် တုန်းကဆိုရင်တော့ ရခိုင်သွေးချင်းတွေ တော်တော် များတယ်။ ခုကျတော့ ရခိုင်တွေ၊ ချင်းတွေက တပ်ထဲ မ၀င်တော့ဘူး။ မလေးရှားပဲသွားကြတော့တယ်။ သူတို့ နယ်မြေတွေမှာလုပ်ရကိုင်ရတာ ခက်လို့ဆိုပြီး ချင်းမှာ ဆိုဘာမှ မထွက်ဘူး။ တောင်ဇလပ်ပင်တော့ ထွက် တယ်။ ဒါကလည်း ကွေ့ကောက်ပြီးပေါက်တာ။ ဘာ ပရိဘောဂမှလည်း လုပ်လို့မရဘူး။ ဒါဆို ဒါတွေကို Tourist Lineအနေနဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေ စိတ်ဝင်စား အောင် ဘယ်လိုပြမလဲ။ ဒါတွေလည်းမသိဘူး။ ဒါတွေ ခေတ်မစားတော့ မလေးလိုနေရာမျိုးမှာ ချင်းတွေ အများကြီးပဲ။
လက်ရှိမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးတွေလုပ်နေတယ်ဆိုသော် ငြားလည်း အချို့သော အောက်ခြေမှာ တပ်မတော်နဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကြားဖြစ်ပွားတဲ့ တိုက်ပွဲအချို့အပေါ် မူတည်ပြီး သမ်္မတဟာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီး ချုပ်အပေါ် သြဇာမညောင်းဘူးလို့ ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါ တယ်။ ဒီလို ဝေဖန်မှုတွေအပေါ် ဘာများပြောချင်ပါ သလဲ။
ဒါကို ကျွန်တော် လုံးဝ အယုံအကြည် မရှိဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ယနေ့လွှတ်တော်ထဲမှာသမ္မတကြီး က ပြောလိုက်တဲ့အဆို၊ ပြင်ဆင်ချက်ဆိုရင် တပ်မ တော်သားတွေအကုန်လုံးထောက်ခံတယ်။ ဒါမကောင်း ဘူးဆိုပြီး လွှတ်တော်က ပြောလည်းမရဘူး။ သမ်္မတ ကြီး ရဲ့သဘောထားဆိုတာနဲ့ တပ်မတော်သားတွေ အကုန်လုံးက ထောက်ခံတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ လွှတ်တော်ကိုကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ လွှတ်တော်နဲ့ အခင်းအကျင်းကို မကြည့်တတ်တဲ့ သူတွေ၊ နား မလည်တဲ့သူတွေဘဲ လျှောက်ပြောနေကြတာ။ တပ်မ တော် ဟာ သမ္မတကြီးဘက်မှာ အပြည့်အ၀ရှိ တယ်။ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ဆိုတာ သမ္မတတိုင်းကို သစ္စာ ခံရမယ်ဆိုတာရှိပြီးသားပဲလေ။ သမ္မတက တပ်မတော် အပေါ်သြဇာမရှိရင် လွှတ်တော်ထဲမှာ သမ္မတရဲ့အဆို ပြင်ဆင်ချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြင်နေရမှာပေါ့။ ခု တပ်မတော် သားတွေက သမ္မတကြီးနဲ့ သဘောထား ဆိုရင်မျက်စိမှိတ်ပြီးကို ထောက်ခံကြတာ။
တစ်ခါတုန်းက ဗိုလ်မှူးကြီးပြောခဲ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်း ရေးမှာ ရွှေလက်နဲ့ခေါ်လို့ မလာရင် ဘူးလက်လွှတ်မယ် ဆိုတာက ပြည်တွင်းမှာ တော်တော် ဝေဖန်ခံလိုက်ရပါ တယ်နော်။ ဒီစကားကဘာကိုများဦးတည် ရည်ရွယ်ပြီး ဆိုလိုချင်တာလဲ ပြည့်စုံစွာ ပြောပြပေးပါဦး။
ကျွန်တော်ပြောတာက ရွှေလက်နဲ့ ခေါ်တုန်းမှာ လာဖို့ကောင်းတယ်။ ကျွန်တော်စကားက ကျွန်တော် ရမ်းပြောတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ ဒါမှန်တယ်ဆိုတာကို ထောက်ခံသူတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ကျွန်တော်ပြော တာကရွှေလက်နဲ့ ခေါ်တုန်းလာပါ။ ဘူးလက်လွှတ်တာ မလိုချင်ပါနဲ့။ ဘူးလက်လွှတ်မယ်လို့ဆိုလိုတာ မဟုတ် ဘူးနော်။ နောက်ပြီး ဂျာနယ်တစ်ခုမှာ ရေးထားတယ်။ ကျွန်တော်က လိုင်ဇာကိုသိမ်းပြီးမှ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေး နွေးမယ်တဲ့။ ကျွန်တော်အဲဒီလို လုံးဝမပြောထားဘူး။ ပြောချင်တာက လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေ မြို့ပေါ်ရောက်ကုန်ပြီ။ မြို့မှာ အခြေချနေကြပြီ။ ဒါကို မြင်တော့ဝမ်းသာပါတယ်။
လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးမှာ အစိုးရနဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့တွေအများကြီးပဲ။ ဒီထဲမှာဗိုလ်မှူးကြီးရဲ့ သဘော ထားအရ၊ အမြင်အရနမူနာ အယူသင့်ဆုံးနဲ့ စံပြအဖြစ် ဆုံး တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့က ဘယ်အဖွဲ့လို့မြင်ပါသလဲ။
ပြောရရငKNUကို နမူနာယူသင့်တယ်။ KNUဟာ တကယ့်ကို အားလုံးက လက်မှတ်ထိုးချိန်မှာ သူမထိုးခဲ့ဘူး။ ပြောရရင် န.၀.တ/န.ယ.က အစိုးရ လက်ထက်မှာ အားလုံးနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လုပ် ပြီးသားဗျ။ အဲဒီလို ရှိပြီးသား သဘောတူညီချက်ကိုပြန် ပြီး ဖောက်ဖျက်တာ၊ ချိုးဖောက်ခဲ့တာဘယ်သူလဲ။KIAပဲလေ။ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးလက် မှတ် ထိုးမယ်ဆိုတာထိုးစရာမလိုဘူး။ KIAနဲ့ပဲ ထိုးရ မှာ။ ကျန်အဖွဲ့တွေ အားလုံးကထိုးပြီးသားပဲ။ ပြန်ထိုးရမှာKIAနဲ့တဲ့။ဒီ Agreementက ပျက်ပြယ် တာမျိုးမရှိဘူး။ ခုမီးကျိုး မောင်းပျက်ဖြစ်နေတဲ့CNFတို့ ဘာတို့ကို လာကြပါ။ ဆရာကြီးတို့ဆိုပြီးလုပ်နေရ တယ်။ CNF ကိုလက်မခံတဲ့ ချင်းတွေအများကြီးပဲ။ ဦးအောင်မင်းတို့ကလည်း နည်းနည်းဆို ငါတို့က အဖွဲ့ တွေအများကြီးနဲ့လုပ်တာဆိုပြီး။ Peace Prize လေးများ ရမလားဆို ပြီးထင်ပါရဲ့ဗျာ။ ဒီလိုမျိုးလုပ်တာတွေတော့ မကောင်း ဘူး။ ဥပမာ ပအိုဝ့်ထဲက ဦးခွန်ဥက္ကာဆိုရင်UNFCညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ် ကောင်စီမှာ အတွင်းရေးမှူးတဲ့။ UNFCကို ကျွန်တော်တို့ကတော့ ကုလသမဂ်္ဂဘောလုံး အသင်းလို့ပဲ သိတယ်။ ဦးခွန်ဥက္ကာက အတွင်းရေးမှူးလို့ ပြောတယ်။ သူကပအိုဝ့်နီလား၊ ပအိုဝ့်ဖြူလား။ သူ့ကို ပအိုဝ့်နီကလည်း လက်မခံဘူး။ ပအိုဝ့်ဖြူကလည်း လက်မခံဘူး။ ဒါဆိုပအိုဝ့်ကြောင်ကျားပေါ့။ အဲဒီ ပအိုဝ့် ကြောင်ကျားက အဲဒီမှာ အတွင်းရေးမှူးလုပ်နေတယ်။ သူတို့နဲ့ လက်မှတ်ထိုးမယ်ပြောတော့ ကျွန်တော် ပြော တယ်။ ဒါ မလိုဘူး။ ယခင် န.၀.တ/န.ယ.က ခေတ်ကတည်းက လက်မှတ်ထိုးပြီးသားပဲ။ အဲဒါ မပျက်ပြယ်ဘူးလေ။ အဲဒီလို မပျက်ပြယ်တာကို ပြန်ထိုး မယ်ဆိုတာကိုက အဓိပ်္ပာယ်လုံးဝမရှိဘူး။ ဒါကို ပြန် ချိုးဖောက်တာKIA ပဲ၊ ဒါကြောင့်သူနဲ့ပဲ ပြန်ထိုးရမှာ။ ဥပမာ အလင်း ၀င်တဲ့သူတွေအကုန်ပြန်လာခဲ့။ ငါတို့နဲ့ လက်မှတ်ပြန်ထိုးကြရအောင်။ လူအများကြီးနဲ့ထိုးတာ ဆိုပြီး မရှိတော့တဲ့ သူတွေနဲ့ လက်မှတ်လိုက်ထိုးပြီး ကျားသေကို ပြန်အသက်သွင်းနေကြတယ်။ အဓိကKIA ပဲ။ မကျေနပ်ရင် ကျွန်တော့်ကိုလာရှင်း။ မသိ အောင် လက်သီးပုန်းတော့ ချောင်းမရိုက်နဲ့။ မြစ်ဆုံ ကိစ်္စမှာဆိုလည်း ဝေခွဲမတည့်လိKIA က စတီဗင် လောတို့ စက်ရုံကို ဗုံးခွဲခဲ့တာပဲလေ။ သူတို့မရလို့ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့လုပ်နေတယ်။ ကျွန်တော်လျှောက်ပြော နေတာ မဟုတ်ဘူး။ သက်သေအထောက်အထား အကုန်ရှိတယ်။
တိုင်းရင်းသားတွေ အနေနဲ့က အစိုးရအပေါ်မှာ စောင့်ကြည့်နေရတဲ့ အနေအထားမှာပဲ ရှိသေးတယ်။ အပြည့်အ၀ယုံကြည်လို့ မရသေးဘူးလို့ဆိုတယ်။ အစိုးရ ရဲ့ ဘယ်လိုအချက်မျိုးတွေ မူဝါဒမျိုးတွေက တိုင်းရင်း သားတွေအတွက် စောင့်ကြည့်စရာအနေအထားမျိုးတွေ ဖြစ်သွားစေတာလဲ။
ကျွန်တော်တို့မှာ လွှတ်တော်ရှိတယ်။ အစိုးရရှိ တယ်။ မဏ္ဍိုင်အစုံရှိတယ်။ ဒီလိုမဏ္ဍိုင်အစုံ ရှိရဲ့သားနဲ့ လွှတ်တော်ပြင်ပမှာ စကားသွားပြောမယ်ဆိုရင်တော့ အယုံအကြည်မရှိဘူး။ လာခဲ့ပါလွှတ်တော်ထဲကို။ ၈၈ တို့ဘာတို့လည်း ဒီအတိုင်းပဲ။ ဟိုဘက်ကနေသွားမယ်။ ဒီဘက်ကနေ သွားမယ်။ ကျွန်တော်အဲဒါတွေတစ်ခုမှ အယုံအကြည်မရှိဘူး။ ဒါတွေမှာ အလာကားပါဗျာလို့ ပြောရမှာပေ့ါ။ တကယ်တမ်း သူတို့မှာဆန်္ဒမရှိပါဘူး။ တကယ်တမ်း ဆန္ဒရှိတဲ့KNU ဆန္ဒတကယ်ရှိတယ်။ ပြန်လည်း မလုပ်တော့ဘူး။ ခုပြီးသွားပြီ။KNU က ဘယ်နည်းနဲ့မှပြန်လုပ်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ အစိုးရအဆက်ဆက်မှာ သူတို့ဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ ခုတော့ သူသိသွားပြီ။ တလောက ကချင်က ကျောင်းဆရာမ တစ်ယောက်က ပြောတယ်။ ကျွန်တော့်ကို ကချင် ပြည်နယ်မှာ ကျောက်စိမ်းတွေ၊ သစ်တွေအကုန်ပြောင် သွားတော့မှုဗ နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရမယ်တဲ့။ အဲဒီလို ကုန်သွားတဲ့ တစ်နေ့ပဲဖြစ်နိုင်မယ်တဲ့။
ဒါဆို အဲဒီကျောင်းဆရာမ ပြောသွားတဲ့ စကား အပေါ်မှာရော ဗိုလ်မှူးကြီးရဲ့ Personal အမြင်အရ ဘယ်လို သုံးသပ်လိုပါသလဲ။
ကျောင်းဆရာမကတော့ သူ့စိတ်ထဲရှိက ပြော သွားတာပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော် မြင်တာကတော့ စဉ်းစား ကြည့်ပေါ့ဗျာ။ ဘယ်လောက်ထိ၊ ဘယ်အတိုင်းအတာ ထိ လိုက်လျောကြမှာလဲဗျာ။ အခုဟာ သူတို့အနေနဲ့ ဖက်ဒရယ်ပေးပါလို့ကို တောင်းနေစရာ မလိုဘူး။ ဖက် ဒရယ်ကရ ပြီးနေပြီလေ။ ကျွန်တော့်ကို တစ်ယောက် ကလာပြောတယ်။ အစိုးရဆီက တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ကချင်မှာကျောက်တူးချင်တယ်တဲ့။ အဲဒါတစ်ယောက် ကပြန်ပြော တယ်။KIA နယ်မြေထဲမှာ အစိုးရဆီက တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်လည်း ဘာမှအသုံးဝင်မှာ မဟုတ် ဘူးတဲ့။KIAက ၁၀ ပေပတ်လည်ကို နှစ်သောင်းယူ တယ်။ လူတစ်ယောက် ငါးထောင်ယူတယ်။ အစိုးရ ကျတော့ တစ်ပြားမှမရဘူး။ ဖက်ဒရယ်ဆိုတာ တောင်း နေစရာမလိုဘူး။ ရပြီးနေပြီလေဗျာ။
လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပြည်တွင်းလူမှုအထောက် အကူပြုပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ Peace Processတွေမှာ ပါဝင်နေမှု အခန်းကဏ္ဍကိုရော ဗိုလ်မှူးကြီး ဘယ်လို သုံးသပ်ပါသလဲ။ သူတို့ရဲ့ ပွင့်လင်းမှုကရော တိုင်းပြည်အတွက် အမှန်တကယ် အပေါင်းလက်္ခဏာ ဆောင်နေပြီလို့ ယူလို့ရနိုင်ပါမလား။
ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြောရရင် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့ အစည်း လို့ဆိုနေတဲ့ သူတွေတောင်မှ မပွင့်လင်းဘူး။ သူတို့ကိုယ်တိုင်ပါးစပ်ကသာ ပွင့်လင်းနေတာ။ မင်းကို နိုင်သူ့စာအုပ်ထုတ်တယ်။ ကြည်ဖြူသျှင်က အကုန်ဝယ် သွားတယ်။ သိန်းဘယ်လောက်ဖိုးရောင်းရသလဲ၊ မင်း ကိုနိုင် ဘယ်သူ့မှမပြောဘူးလေ။ ပြောရင်အခွန်ဆောင် ရမယ်လေ။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့ အစည်း ဆိုရင် ဗြောင်ပြောပေါ့ဗျာ။ ဥပမာ အနေနဲ့ပေါ့နော်။ သူတို့ကို ဂျော့ဆိုးရောစ် ငွေဘယ်လောက်ပံ့ပိုး ထား တယ်ဆိုတာသူတို့မပြောဘူး။ ပွင့်လင်း လူ့အဖွဲ့အစည်း ဆိုတာ ဂျော့ဆိုးရောစ်ရဲ့ နာမည်ပဲ။ သူတို့ကိုယ်တိုင် လည်း ပွင့်လင်းဖို့လိုသေးတယ်လေ။
၂၀၀၈ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင် ရေးအတွက် လွှတ်တော်ကနေ ကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီးလည်း ဆောင်ရွက်နေပြီ။ ဒီတော့ဖွဲ့စည်းပုံမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်အတွက် ကန့်သတ်ထားတယ်လို့ အများက ဝေဖန်နေတဲ့ ပုဒ်မ ၅၉ (စ) ပြင်ရေး၊ မပြင်ရေးစသဖြင့် ဗိုလ်မှူးကြီးနဲ့ သဘောထားအမြင်ကိုလည်း သိပါရစေ။
၅၉ (စ) က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကန့်သတ်ထားတာဆိုရင် ဒါစွပ်စွဲတာပဲ။ ကျွန်တော့် အမြင်ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမျိုးသားဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင် ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်တယ်။NLD မှာလည်း ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်က လွဲပြီး ကျန်တဲ့ကောင်တွေ တစ် ကောင်မှ သောက်သုံးမကျဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်း လက်ခံတယ်။ ဒီတော့ သူ့ကိုသမ္မတဖြစ်အောင်ဘယ်လို နည်းနဲ့ ဖြေလျှော့ပေးမလဲပေါ့နော်။ သူ့မှာ ခင်ပွန်းက လည်းသေသွားပြီ။ နိုင်ငံခြားက သူ့သားနှစ်ယောက် မြန်မာနိုင်ငံသား ခံယူလိုက်ရင်ပြီးရော၊ ချွေးမတွေ ဘာတွေဆိုရင်လည်း ကင်းလွတ်စေဆိုပြီး ဖြေလျှော့ ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ အဲဒီမှာ ဦးကိုနီက ဘာထ ဖြစ်သလဲဆိုရင် ဦးလှဆွေ ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသား သားနှစ်ယောက်ကို ဘယ်နိုင်ငံသား ခံယူပါ၊ ဒီနိုင်ငံသားခံယူပါလို့ ပြောခွင့်မရှိဘူးတဲ့။ ကျွန်တော် ဆိုလိုချင်တာက သားနှစ်ယောက်လို ပြော လို့မရရင် သန်းခြောက်ဆယ်သော ပြည်သူတွေကို ဘယ်လိုပြောမလဲ။ ကျွန်တော်ပြောတာ မဟုတ်ဘူး လား။ ကျွန်တော် တို့တတ်နိုင်သမျှ ဖြေလျှော့ပေးမယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာလည်း အရည်အချင်းရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတစ် ယောက်ပါ။ သူ့ကို ပုဂ်္ဂလိက အမြင် ကပ်တာမျိုး လုံးဝမရှိပါဘူး။
ဗိုလ်မှူးကြီးခုနကပြောသလိNLD မှာဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်ကလွဲပြီး ကျန်တဲ့သူတွေမှာ အရည်အချင်း မရှိဘူးဆိုရင်NLD အနေနဲ့ အင်အားစုတစ်ခုအနေနဲ့ ပတ်သက်လာမယ့် ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီး ရဲ့ နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းပေါ်မှာရော ဘယ်လိုမြင် သလဲ။ ဘာလို့ဆိုတော့ အစိုးရတစ်ရပ် ဖွဲ့နိုင်ဖို့ သူ့ရဲ့ အင်အားစုတွေဟာ ရွေးကောက်ပွဲမှာမှတ်ကျောက်တင် ခံကြရတာ ဖြစ်လို့ပါ။
ကျွန်တော်ပြောမယ်။ ၂၀၁၅မှာ NLD က ဘယ် လိုပွဲထွက်လာမလဲဆိုတော့ ကိုယ့်ပုံကိုယ် မပြရဲတဲ့သူ တွေပဲ။ လာလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ကျွန် တော်တို့ပုံ ကျွန်တော်တို့ ပြရဲတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကိုပဲကြည့်။ ကြံ့ခိုင်ရေးက ဦးဖြူနဲNLD က ဦးမဲတို့ပြိုင်ကြတယ်ပေါ့နော်။ အဲဒီမှာ ကြံ့ခိုင်ရေးဦးဖြူက သူ့ဓာတ်ပုံကြီး ချိတ်ပြီးပြတယ်။ ဗီနိုင်းနဲ့ထုတ်ပြီးကားနဲ့ လှည့်တယ်။NLDကဦးမဲက တော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဘိလတ်သွားတုန်း အင်္ကျီ ထဲ လက်နှိုက်ထားတဲ့ ပုံကိုချိတ်ပြီးလာတာ။ နောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုဝါကြီးနဲ့ပုံကို ပုံကြီးချဲ့ ချိတ် ထားတယ်။
ကြံ့ခိုင်ရေးက ဦးဖြူက လူဖော်ပြီးNLD က ဦးမဲက ပုန်းနေတယ်ဆိုတော့ သူကဘာတုန်း။သူတို့က ကျွန် တော်တို့ ကြံခိုင်ရေးတွေကို မိုးကျရွှေကိုယ်လို့ ပြော ကြတယ်။ သူတို့ကကျတော့ မြေလျှိုးပြီးလာတာဗျ။ ရောက်လာတာဗျ။ ပြောချင်တာက ၂၀၁၅ ရွေး ကောက်ပွဲမှာ ပြိုင်မယ်NLD က အမတ်တွေ ကိုယ့်ပုံ ကိုယ်ဖော်ပြီးပြိုင်ပါ။ ဓာတ်ပုံကြီးနဲ့လာပါ။ ကျွန်တော် ကတော့ ဒီရှုပ်ပါတီက မောင်မဲဖြစ်ပါတယ်။ ကြံ့ဖွံ့ က ဘူးလက်လှဆွေနဲ့ ပြိုင်ပါမယ်ဆိုပြီး သတိ်္တရှိရှိပြိုင် ပါ။ ခုဟာက သူတို့ပုံလည်းမဖော်၊ လွှတ်တော်ထဲ ရောက်တော့လည်း ဘာမှမပြောရဲဘူး။ လွှတ်တော် ထဲမှာနင်လား၊ ငါလား အစိုးရကို အတိုက်အခံလုပ် တာ ကြံ့ခိုင်ရေးက အမတ်တွေပဲ။ ဒီချုပ်လား၊ ဒီရှုပ် လားတော့ မသိဘူး။ လွှတ်တော်ထဲမှာလည်းဘာမှ မပြော။ စည်းရုံးရေးဆင်းတော့လည်းသူ့ ပုံသူမဖော်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပုံကြီးနဲ့ဆိုတော့ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းကဘယ်တုန်းကများNLD ပါတီဝင် သွားလည်းမသိဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်ပုံကြီးကိုသုံးပြီး စည်းရုံး ရေးဆင်းမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုမှ မယှဉ်နိုင်ဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ဆိုတာက ပြည်သူတွေနဲ့အမြင်မှာ နံ့သာဆီနဲ့ လက်ပံတုံးလိုပဲ။ ကျွန်တော်ယှဉ်ရင် ရှုံးမှာပဲ။ စန်္ဒာမင်းပဲ လာလာ၊ ဇေယျာသော်ပဲလာလာ။ ဘူးလက်လှဆွေနဲ့ပြိုင်မယ်။ စန္ဒာမင်းဆိုလည်း စန်္ဒာမင်းပုံကိုဖော်ပြီးပြိုင်၊ ဇေယျာ သော်ဆိုလည်း သူ့ပုံကိုသူဖော်ပြီးတော့ပြိုင်၊ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းပုံနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပုံကို ဖော်ပြပြီးတော့ သူတို့ပုံကို သူတို့မဖော်ဘဲ ရွေး ကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်ရင်တော့သတ်္တိမရှိလို့ပဲ၊ ကျွန်တော် ကတော့ ဒီလိုပဲမြင်တယ်။ ဒီလိုပဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နဲ့ဆိုလည်း ဘယ်လိုမှ မယှဉ်နိုင်ပါဘူး။ လာမယ့် ၂၀၁၅ ပွဲထွက်တဲ့အခါNLD အနေနဲ့ သတိ်္တရှိကြပါ။ နောက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာလည်း အသက်လည်းရလာပြီ။ ချင်းတောင်လို ရေခဲတဲ့နေရာတွေ သွားမနေပါနဲ့။ ကျန်းမာရေး ထိမှာစိုးလို့ပါဗျာ။ အဲဒီချင်းတောင်လိုနေရာတွေမှာ တိုင်းရင်းသားတွေကိုပဲပေးလိုက်ပါ။ သတိ်္တဆိုတာက ဒါငါ့ပုံ ဒီပုံချိတ်ထားပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင် အရွေးခံ မယ်။ ဒါဆိုပြည်သူက အကဲခတ်ပြီး ရွေးသင့်မရွေး သင့် စဉ်းစားလို့ရပြီလေ။ ခုဟာက ဗိုလ်ချုပ်ပုံပဲ သုံးနေတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာမြန်မာပြည်သူ တွေရဲ့ နှိုင်းမရတဲ့ ဖခင်။NLD ပါတီရဲ့ ခေါင်း ဆောင်လည်းမဟုတ်ဘူး။ ပါတီဝင်လည်း မဟုတ်ဘူး။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၅ရက်နေ့ကDVBဦးဆောင် ပြီးလုပ်တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ ကို ဗိုလ်မှူးကြီး တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့လည်း သိရပါ တယ်။ အဲဒီလိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ရလဒ်တွေက ဘာတွေ များရခဲ့သလဲ။ အဲဒီဆွေးနွေးပွဲရဲ့ ရလဒ်တွေကရော အခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးအတွက် ဘယ်လောက် အထိ အကျိုးရှိစေခဲ့ပါသလဲ။
DVB ကလုပ်တဲ့အခြေခံဥပဒေအပေါ်သဘော ထားအမြင်ဆွေးနွေးပွဲကိုတက်တဲ့အခါမှာ ဦးကိုနီတို့၊ ကိုမြအေးတို့ကSpeaker အနေနဲ့ပြောပြီး NLD က ဦးတင်ဦးလည်းပါတယ်။ အမှန်တကယ်တော့ ကျွန် တော်က Live လွှင့်နေတယ်ထင်ပြီး ကျွန်တော် ရဲ့အမြင်ကိုပြောလိုက်တာ။DVB ကNLDVB ဖြစ် သွားတယ်။NLD ကိုပဲ ဇောင်းပေးပြီးလွှင့်ကြတယ်။NLD ကိုပဲ ဇောင်းပေးပြီး ဖော်ပြကြတယ်။ အရင် တုန်းက ဦးတင်ဦးတို့၊ ဦးကိုနီတို့ကိုအရမ်းအထင်ကြီး ခဲ့တယ်။ ဒီပွဲရောက်မှ ဒီလူတွေဟာ အလကား လူ တွေမှန်းကျွန်တော်သိလိုက်ရတယ်။ အဲဒီမှာ ဦးတင်ဦး က တပ်မတော်ကိုပြောတယ်။ တပ်မတော် ကြီးဟာ ပြည်သူ့ချဉ်ဖတ်လို့ ပြောတယ်။ ဦးကိုနီက လည်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လုံးဝပြောင်းပစ်ရမယ်တဲ့။NLD ကတော့ ပြုပြင်ဖို့ပြောတာပါတဲ့။ ကျွန်တော့် အယူအဆကတော့ ပြောင်းပစ်မယ်တဲ့။ ဒီလိုဆို ကိုယ်တက်လာတဲ့ သစ်ကိုင်းကိုကိုယ်ပြန်ခုတ်သလိုပဲ။DVB က လုပ်တဲ့သဘောထားဖလှယ်ပွဲ ဖြစ်လာတာ ဟာ အခြေခံဥပဒေကြောင့် ဖြစ်လာတာဗျ။ အမှန် တကယ်ဆDVB ကအော်စလိုလိုနေရာမျိုးမှာပုန်းလျှိုး ကွယ်လျှိုးနဲ့ နေနေရမှာ။ ဒီမှာ လာလုပ်နိုင်တာ အခြေခံဥပဒေကြောင့်။ ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော် ရဲ့ အမြင်ကတော့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ လေ့လာ သုံးသပ်ရေးပွဲ မဟုတ်ဘဲနဲ့ တပ်မတော် ရှုတ်ချရေး ပွဲဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော် ပြောခဲ့တဲ့ဟာ တွေလည်း တစ်ခုမှမပါဘူး။ နေ့လယ် ၁၁နာရီ ကနေ ၁၂ နာရီအထိ လွှင့်တယ်။NLD ကို အသားပေး ထုတ်လွှင့်မှုပုံစံလို ဖြစ်နေတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရင် ဦးတင်ဦးကတပ်မတော်ကို ပြည်သူ့ချဉ်ဖတ်၊ ပြည်သူ့ချဉ်ဖတ်လို့သာပြောနေတယ်။ သူသာရာထူး ဆက်ရနေမယ်ဆိုရင် သူဒီစကားမျိုးပြောမှာမဟုတ် ဘူး။ သူအထုတ်ခံရလို့ ဒီစကားမျိုး ပြောတာ။ သူအထုတ်ခံရတဲ့နောက်ပိုင်းကစပြီး ဒီအဘိုးကြီးက အားလုံးကို ကိုးလိုးကန့်လန့်တိုက်လာတာ။ ကိုးလိုး ကန့်လန့်တွေ ပြောလာတာ။ ဆိုလိုရရင်NLD က ဦးတင်ဦးပြောတာကိုလည်း ကျွန်တော် သိတယ်။DVB က လုပ်တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအမြင် ဆွေးနွေးပွဲဟာတပ်မတော်ရှုတ်ချရေးလိုဖြစ်နေတယ်။ တပ်မတော်ကို ရှုတ်ချတဲ့သူကလည်း တပ်မတော်မှာ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လုပ်လာတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်လာတဲ့ ဦးတင်ဦးက လုပ်နေ တယ်။ ဒီဦးတင်ဦး ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကို ကြည့် မယ်ဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘယ်မှာ ဘာ ပြောခဲ့တယ် ဆိုတာချည်းပဲပါတယ်။ ဒီအဘိုးကြီးက ဒေါ်စုနားခိုကပ်နေတဲ့အဘိုးကြီးလို့ပဲမြင်မိသွားတယ်။ ရှေ့နေ မောင်ကိုနီဆိုရင်လည်း ဥပဒေပုဒ်ထီး၊ ပုဒ်မ တွေ အကုန်လုံးကို အရည်ကျိုသောက်ထားတဲ့ ပညာရှင်တစ်ယောက်လို့ လေးစားခဲ့တာ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလူကြီးဟာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကြီးဟာ ဘာမှ သုံးစားလို့မရတဲ့ ပုံစံမျိုးပြောနေတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဟာ သုံးစားလို့ရတာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ပွင့်ပွင့် လင်းလင်းပြောရရင် ဦးတင်ဦး တို့လို၊ ဦးကိုနီတို့လို လူတွေရှိနေလို့ မြန်မာပြည် ကြီးဟာ ရှေ့ဆက်လို့မရတာဗျ။
ဗိုလ်မှူးကြီးခင်ဗျာ။ တပ်မတော်မှာ ကာကွယ် ရေးဦးစီးချုပ်အဆင့်အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ ဦးတင်ဦးလို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းတစ်ဦး အနေနဲ့ လက်ရှိ တပ်မတော်အပေါ်မှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့ သူက ဘယ်အချက်တွေ ပေါ်မူတည်ပြီး ဝေဖန်တယ်လို့ယူဆလို့ရပါသလဲ။
ကျွန်တော် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုဖမ်းခဲ့တာ ခြေလျင်စစ် သားတွေ တစ်ယောက်မှမပါဘူး။ ဖမ်းခဲ့တာထောက် လှမ်းရေးကကောင်တွေပဲ။ လက်ရှိကျွန်တော်တို့ တပ်မတော်ကဘာကြောင့်အပြောအဆိုခံနေရသလဲ။ ဘာကြောင့်ဝေဖန်ခံနေရသလဲဆိုရင် ထောက်လှမ်း ရေးကြောင့်ပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ခြေလျင်စစ်သားတွေ ဘာမှ သိရှာတာ မဟုတ်ဘူး။ ခြေလျင်စစ်သားတွေ သေနတ်ကိုင်ပြီး ကာကွယ်နေချိန်မှာ ထောက်လှမ်း ရေးက တပ်ကြပ်အဆင့်က ခွေးချည်တဲ့ကြိုးလောက် ရှိတဲ့ ဆွဲကြိုးကြီးတွေစွဲပြီး နေကြတယ်။ ထောက် လှမ်းရေးကြောင့် ကျွန်တော်တို့ တပ်မတော်သိက္ခာ ကျရတာ။ ကျွန်တော်တို့ ခြေလျင်တပ်သားတွေ ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ တိုင်းပြည်တာဝန် ထမ်းဆောင်နေချိန် မှာ ထောက်လှမ်းရေးကကောင်တွေက ခွေးချည်တဲ့ ကြိုးလောက်ရှိတဲ့ ဆွဲကြိုးကြီးတွေဆွဲပြီး အငြိမ့်စား နေနိုင်တယ်။ ဒီလိုမျိုးနေနိုင်တာကိုလည်း သူ့အထက် က လူကြီးတွေက ပြုံးပြုံးကြီး ကြည့်နေကြတယ်။ လက်ရှိကာလမှာတပ်မတော်ကဘာမှသိတာ မဟုတ် ဘူး။ ဘာမှအပြစ်ရှိတာ မဟုတ်ဘူး။ တကယ်ကို အပြစ်ရှိပြီး တကယ်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်း သားတွေကို နှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ထောက်လှမ်းရေးကို မပြော ဘဲနဲ့ ကျွန်တော်တို့ တပ်မတော်ကို ပြောနေတာ အဓိပ်္ပာယ်မရှိဘူး။ အဲဒီပွဲမှာ အဲဒါကို ထည့်ပြောခဲ့ တယ်။ သူတို့ဆီကလွှင့်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်ထည့် ပြောခဲ့တာ တစ်ခုမှ မပါဘူး။ ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့ အသံဆိုတာက မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ အသံတွေပဲ ထုတ်လွှင့်ပေးရမှာပဲ။ ဖြစ်လာတာကျတော့NLD က အသံတွေပဲ ထုတ် လွှင့်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့ အသံလို့မမြင်ဘူး။NLDVB လို့ပဲ ကျွန်တော်က တော့ မြင်တယ်။
ဟုတ်ကဲ့ခုလို ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် ဗိုလ် မှူးကြီးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Hot news မှာ ပါတဲ့ Bullet လှဆွေ ရဲ့ NLD, ၈၈ ပွင့်လင်း နဲ့ အခြား နိုင်ငံရေး အင်အား စုတွေ အပေါ်ပြော ကြားချက် ကို ကျွန်တော့ အမြင် ကတော့ ကွင်းထဲ မှာ ကစား သမား တစ်ဦး က တစ်ဖက်အသင်းပေါ် ခပ် ကြမ်းကြမ်း လေး ကစား လိုက်တဲ့ သဘော လို့ ပဲ မြင်ပါတယ်။ လွှတ်တော် ထဲ က ပြိုင်ဖက် နိုင်ငံရေးသမား အချင်းချင်း ဒီလောက်ပြောတာ မှုစရာ မရှိပါ ဖူး၊ ကိုယ်လည်းပဲ တွယ်စရာရှိ တွယ် ခဲ့ ကြ၊ တွယ်ကြ အုန်းမှာပါပဲ ။ ဦးလှဆွေ က အတိုက်အခံ ဖက် ကိုမှ မဟုတ်ပါဘူး သူ့ USDP နဲ့ အစိုးရ အဖွဲ့ ကို လည်း ဒီ Tone အတိုင်း တုတ်စရာ ရှိ တုတ်နေတာပါဘဲ။
ရှင်းရှင်း ပြော ရရင် NLD အဖွဲ့ ရဲ့ capacity အပေါ် ထိကပါးရိကပါး လုပ်တာ၊ ကျေးဇူးတောင်တင် ရအုန်း မှာပါ။ ကိုယ့်ဖက် က အဲ့ဒိ အပိုင်းကို ဖိလုပ်ပေါ့။ နိုင်ငံရေးကြိုး ဝိုင်းဆိုတာ ဒီ လိုပဲ တစ်ဖက် ကို ဒေါသ ဖြစ်အောင်ဆွ ပြီး အငိုက်ဖမ်းပြီးကစားရတာပဲ။ ဒေါသဖြစ်တဲ့လူရှုံး ပေါ့။ ကြည့်ပါလား သမ္မတ အသင်း က လူတွေ နောက်ပိုင်း ပွဲစဉ်တွေ မှာ အပြတ်အသပ် အလဲ အကွဲပါ၊ ကျွန်တော့ခံယူချက် ကတော့၊ နိုင်ငံရေး နဲ့ ပါတ်သပ်လို့ အမှားရှိ ရင်၊ အားနည်းချက်ရှိရင် ကိုယ့်လူ မှို့ ၊ ကိုယ့်ဖက်သားမှို့ လို့ ဆိုပြီး ညှာလို့ ၊ ညာလို့ မရပါဖူး။ နိုင်ငံရေး ဆိုတာ ပြည်သူ့ အရေးပါ ။ကိုယ့်လူမှို့ လိုညှာရင် ပြည်သူနာမယ်၊ ကိုယ့်လူမှို့ လို့ ညာပေးရင် ပြည်သူကိုပါ ညာ သလိုဖြစ်မယ် ။ Bulletလှဆွေ ရဲ့ အမြင်မျိုး ကို ကိုယ် ကသူ့ လို ပြိုင်ဖက်မဟုတ် လို့ သူပြောသလိုရင့်ရင်သီးသီး တွေ မပါပေမယ့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေ ကို အဲဒီ လိုပဲမြင်တာတွေ၊ပြောတာတွေရှိပါတယ်။ မီဒီယာသမားအနေ နဲ့ ဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒီမိုကရေစီ လိုလားတဲ့ နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စား သူတစ်ယောက်အနေ နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ဒီ ကိစ္စကို ဖေါ့ပြီးပြောရင် နိုင်ငံရေး ခေါက်ဆွဲ စားသလို ရှက်စရာကောင်းတယ် လို့ ကျွန်တော်ခံစားမိပါတယ်။
ဒီနေ့ power နိုင်ငံရေး အကြောင်းပြောရရင် အတိုက် အခံကို တစ်သင်းထဲကစားမယ်ဆိုပြီး ဆွဲ စိ ပြီး တကယ်ကစားတော့ line-up ထဲ မထည့် ၊ ထည့်ကစားပြန်တော့လည်း ဘောလုံးပေး မကစားပဲ ခု တခါ အသင်းထဲ ကနေ အနီကပ်ပြပြီး အထုတ်ခံ ရအောင် ဂွင်ဆင်နေ လို့ အာဏာရပါတီ ကို လူလိမ်တွေ၊တကယ်တိုင်း ပြည်မျက်နှာမကြည့်တဲ့ သူတွေလို့ မြင်တယ်။ အတိုက်အခံ ကိုလည်း ချိုမိုင်မိုင် တွေ များပြီး လူထု ကို နိုင်ငံရေး အမြင်အားကောင်းပြီး အစိုးရရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အရှိန်လျော့ မသွားအောင် ဖိအားပေး နိုင်တဲ့ ရေချိန် ကိုရောက်အောင်ဆွဲ မတင်နိုင် လို့ အားမရဖူး၊ ဝေလေလေတွေ၊ နိုင်ငံရေး performance တွေသာများပြီး၊ လူထု က အားကိုးအားထား ပြုရမယ့်ရုပ်မပေါက်ဖူး ၊ ဟိုလူတွေ မစွံလို့ ဒီလူတွေကိုတစ်လှည့် အားကိုး ကြည့်အုန်းမယ်ဆိုတဲ့ မရှိ သုံး နိုင်ငံရေး ဘဝ က မတက်ဖူး ။ ဆောရီးပါ ကျွန်တော်လည်း ဒီ လို ဘေးထိုင်ဘုပြော ဘဝ ကမကျွတ်ဖူး ။ သေရော ။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင်(ငြိမ်း)၏ မိသားစု ဘဝကော...
စင်္ကာပူ ကျောင်းသား ၅၈ ယောက်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ေ...
ကရင်မှာ သစ်ခုတ်ရင်း ကြီးပွားလာတဲ့ Htay Family က သူ...
ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရဲ့ အမိန့်ရှိတဲ့အတိုင်း ဖျက်ပြီ...
ပြည့်တန်ဆာ တိုက်ဖျက်ရေးမှာ ဖာခေါင်းကို ဥက္ကဌ ခန့်ထာ...
ဖွတ်ပါတီကအတော်ဆုံးဆိုတဲ့ ၅ ယောက်လောက်ဘဲဆွဲထုတ်ပြစမ...